ဘာနဲ့အစားထိုးမှာလဲ – My Blog
ညက တိတျဆိတျလှနျး၍ အမှောငျက သိပျသညျးလှနျးနသေညျ။ ခဈြထှနျး အပိုငျစားရထားသော ကားဂိုဒေါငျ၏ နောကျဖကျ အိပျခနျးလေးထဲ၌မူ အပွာရောငျ မီးပှငျးလေးက လငျးလကျ၍နသေညျ။ “ ဒါ အကို့ အိမျလားဟငျ…” “ ဟငျ့အငျး….ကိုယျက သူမြားဆီမှာ ကပျနရေတာ…” “ အငျး…တျောတျော ခမျြးသာတာပဲ…” ကောငျမလေးက စကားတတျပွီး ဖျေါရှေ၏။ ညဥျ့မယျလေး တဈယောကျကို ခဈြထှနျးက ညလုံးပေါကျဆှဲလာခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ “ မငျး…ကိုယျ့ကို ဈေးမပွောရသေးဘူးနျော…” “ ငါးခုလေ… အဲဒီပေါကျဈေးပဲ…” “ အဟဲ…ငါးရာလား…” “ အဲ…ဟယျ…ငါးထောငျလေ ဆရာကွီးရဲ့…” “ ကိုယျ တကယျမသိလို့ပါ…အခုမှ မငျးကို ပထမဆုံး ချေါမိတာပါ…” “ သနားလိုကျရတော့မလား…” “ မသနားပါနဲ့…ရပါတယျ….သုံးထောငျဆို မရဘူးလား…”
“ အလိုလေးတျော…ဘာမှတျလို့ ဈေးဆဈနရေတာလဲ…တဈညလုံး ရှငျနဲ့နရေမယျ့ ကမြဒုက်ခကိုလညျး ထညျ့တှကျ အုံး….” “ ငါး ထောငျပဲလားကှာ…အဲဒါ…အကုနျပဲ…” “ ဟငျး…ကမြတော့ ဖိတျစာမှားပွီထငျတယျ ဒါနဲ့ ရှငျတဈယောကျပဲ လုပျရမှာနျော…” “ တဈယောကျထဲပါ…” “ အငျး တခြို့က တဈယောကျထဲဆိုပွီး ချေါသှားတာ ဟိုရောကျတော့ လေးငါးခွောကျယောကျဖွဈရော ငှေ ကတြော့ အပွညျ့မပေးခငျြဘူး…” “ ကိုယျက အဲဒီလူယုတျမာစာရငျးထဲ မပါ ပါဘူး…မနကျလေးနာရီထိုးတာနဲ့ မငျး ပွနျပေါ့…” “ အနားယူခှငျ့တော့ ရှိမှာပေါ့နျော…” “ မပွောတတျဘူး…ကြုပျက အတျောထနျနတော…” “ ဟငျး…ကွကျသီးတောငျ ထလာပွီ…ကဲ ပါ အခြိနျဖွုနျးမနနေဲ့…ရှငျ့အဝတျတှေ အရငျခြှတျ….” “ မငျး အရငျခြှတျပေါ့…” “ ကဲလာ….အကိုက ကမြကို ခြှတျ….ကမြက အကို့ ကို ခြှတျပေးမယျ…ဟလား…” “ အျော…ငှကွေေးနဲ့ကာမကို ရောငျးဝယျသူလေးတှမေို့ ဘာဆိုဘာမှ အခကျအခဲမရှိ စငျးလုံးခြော လို့…” ခဈြထှနျးက သူမ၏ အပျေါအကငြ်္ီကို ခြှတျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အောကျခံဘရာစီယာကိုပါ ခြှတျပဈလိုကျသညျ။ အ တှငျး မှာ မာတငျး၍ ဖှံ့ထှားသော ဖွူဖှေး၍နသေညျ့ နို့နှဈလုံးက ရုနျးကနျ၍ ထှကျလာသညျ။
“ မငျး ဒီအလုပျ လုပျတာ ကွာပွီလား…” “ တဈနှဈရှိပါပွီ…” “ မငျးနာမညျ မပွောရသေးဘူးထငျတယျ…” “ အလကားပါ တခွား နာမညျတှေ ပွောမှာပေါ့…အပိုတှေ ပွောမနပေါနဲ့…” “ စကားပွောဖို့ လှယျအောငျပါ…” “ မသေီ…ပါ ” “ အျော…မသေီ အငျး…ဒါ နာမညျပေါ့နျော ” “ ဟငျး…ဟငျး…သခြောပါတယျ…” မသေီ၏ မကျြနှာလေးက တလောကလုံးကို ထီမထငျသလို မကျြနှာပေး လေးနှငျ့ ဖွဈလငျ့ကစား မကျြလုံးလေးတှေ က ရီဝေ၍နသေညျ။ ရှနျးလဲ့၍နသေညျ။ တောကျပ၍နသေညျ။ နှုတျခမျးလေးတှကေ ရှနျးလကျစိုပွေ၍ ဖူးလုံးနသေညျ။ “ မငျး…ခြောတော့ အတျောခြောတယျ…” “ အကို နှမွောလိုကျတာလို့ ပွောမလို့လား…အပို တှေ မပွောကွေးကှာ…မသေီ စိတျညဈတယျ…” မသေီက ခဈြထှနျး၏ ပုဆိုးစကို ဆှဲခြှတျပွီး ကွမျးပွငျပျေါသို့ ပုံခလြိုကျသောအခါ တှငျမူ သူမ၏ ပါးစပျလေး ဟ သှား သညျ။
“ အလိုလေး…လေး…မနဲမနောကွီးပါလားရှငျ့…” မသေီက ခပျငိုကျငိုကျကွီး တှဲကနြသေော ခဈြထှနျး၏ လီးကွီးကို လကျကလေး နှငျ့ တယုတယလေး ဆှဲမသညျ။ “ ကွီးလိုကျတာဟယျ…ခဈြစရာကွီး….ကွညျ့ပါအုံး…” မသေီ၏ လကျဖဝါးလေးပျေါ၌ အိပျပြျော နသေော မွှပှေေးတဈကောငျနှယျ စငျးစငျးကွီး ငွိမျနသေော ခဈြထှနျး၏ လီးထိပျဖူးကွီးမှာ ခပျညိုညိုဖွငျ့ တုတျခိုငျလှသညျ။ “ မငျး ထဘီခြှတျပေးမယျလေ…” “ အငျး…ခြှတျလေ…ကမြတော့လေ အကို့ဟာကွီးတှပွေီ့း ပွနျအမျးခငျြစိတျတောငျ ပေါကျလာပွီ ကှယျ…” မသေီက မှိုရသူ မကျြနှာမြိုးလေးနှငျ့ ရှနျးရှနျးလဲ့လဲ့ ကွညျ့ရငျး ပွောလိုကျသညျ။ ခဈြထှနျး၏ လီးကွီးကိုလညျး လကျနှဈ ဖကျဖွငျ့ ဘယျညာပွောငျးကစားရငျး တခါတရံ ဂှေးစိကွီးကိုပါ ဖွဈညှဈတတျသညျ။ လမှေးမြား ထူပိနျးနသေော ဆီးစပျမှ ထိုးထှကျ လာသော လီးတနျကွီးသညျ ဂှေးစိကွီးအောကျသို့ပငျ ရောကျကာ အမွောငျးလိုကျကွီးဖွဈ၍နသေညျ။ မသေီက လီးဒဈကွီးကို သူမ၏ လကျခြောငျးလေးနှဈခြောငျးဖွငျ့ ညှပျကိုငျကာ ဖွဲခပြွီး အနီးကပျကွညျ့သညျ။
“ အကို့ ဟာကွီးက ထနျမယျ့ပုံပဲ သိလား…” “ ဘာဖွဈလို့လဲဟငျ…” “ ဒဈနကျတယျ…ထိပျလုံးပွီး လုံးပတျထှားတယျ…အတနျ ထကျတောငျ နဲနဲကွီးနသေေးတယျလေ…ဒါမြိုးကွီးတှကေ မိနျးမသုံးလေးယောကျကို တပွိုငျတညျး လုပျနိုငျတဲ့ အမြိုးအစားပေါ့…” “ ပေါကျပေါကျ ရှာ…ရှာ…” ပွောလိုကျပွီးခဈြထှနျးက မသေီ၏ ခေါငျးလေးကို မနာအောငျထုလိုကျသေးသညျ။ “ ဟုတျတယျ အကိုရဲ့ ယောကျြားတှေ တနျဆာကို လလေ့ာထားမှ ကိုယျနဲ့ အပေးအယူလုပျမယျ့ ယောကျြား ဘာ အမြိုးအစားဆိုတာ သိထားရတာ ပေါ့…” “ ဟား…မငျးက အတျောရငျ့နပွေီပဲ…” ခဈြထှနျးက မသေီ၏ စောကျပတျကို စမျးရငျးပွောသညျ။ မသေီက ပေါငျကွားထဲ ထိုးနှိုကျလာသော ခဈြထှနျး၏ လကျကို ပေါငျနှဈဖကျကားပေးလိုကျရငျး… “ မသေီ….ဒီအလုပျကို တဈလမှ တဈခါပဲလုပျတာပါ အကို…ပွီးတော့လဲ ရောဂါရနိုငျမယျ့ အခွအေနမြေိုးလဲ ရှောငျ တယျလေ….” “ ကောငျးပါတယျကှာ…” “ ဟုတျပါတယျ….အကို လညျး မသေီကို စိတျသနျ့မှ လုပျပါ အကို စိတျမသနျ့ရငျ အလကား ပိုကျဆံကုနျ နမှော….” ခဈြထှနျးက ကွေးစားမလေး မသေီကို လေးစားစှာ တဈခကျြနမျးလိုကျသညျ။ ရမှေေးနံ့က ရငျထဲအထိ ထိုးဖောကျဝငျ ရောကျသှားသညျ။
“ မငျးကို မွငျမွငျခငျြး…” “ လိုးခငျြသှားတယျပေါ့…” “ ဟာကှာ မသေီကလဲ ခဈြတယျလို့ ပွောမှာပါ…” “ သှားစမျးပါ အကိုရာ… ခဈြတယျဆိုတာလဲ အနကျဖှငျ့ပွီး ကာလကုနျအောငျ စောငျ့ကွညျ့တော့ နောကျဆုံးတော့ လိုးခငျြတယျ ဆိုတာပဲ ထှကျလာတာပါ…” “ မငျးကို အကို အရှုံးပေးလိုကျပွီ…” “ ဒါပေါ့…ဒီလိုပဲဖွဈရမယျလေ…ဟငျး…” မသေီက ခဈြထှနျးလီးထိပျဖူးအဝကို လကျညှိုး လေးဖွငျ့ ပှတျကွညျ့၍နသေညျ။ “ မငျး…ဘယျပုံစံကို ကွိုကျသလဲ…” “ အိုး…အကိုက ပိုကျဆံပေးထားတာပဲ အကိုကွိုကျသလို ပွောလေ ကုနျးပေးရမလား…” “ အေး ကောငျးတယျ….ဖငျကုနျး….” “ အကို…ဖငျထဲတော့ မလိုးနဲ့နျော…အကို…” “ အေးပါ ဟာ…” “ ပွောထားရသေးတယျ…အကိုတို့ ယောကျြားတှကေ နှာခေါငျးပေါကျတောငျ ထားခငျြတာ မဟုတျဘူး…” “ စကားပွော လိုကျတာ သာလိကာမလေးရယျ…” မသေီက ခဈကနဲ တဈခကျြရယျသှမျးရငျး…စောစောက ခဈြထှနျးက ခြှတျပေးမယျပွောခဲ့ သျောလညျး မခြှတျဖွဈ သေးသညျ့ သူမ၏ ထဘီကို ခြှတျခလြိုကျပွီး ခဈြထှနျးဖကျသို့ တဈခကျြလှညျ့ပွလိုကျပွီး ကော့ပွလိုကျ သညျ။
“ ပစ်စညျးလညျး ကွညျ့အုံးနျော အကို…” ခဈြထှနျးဆီက စကားပွနျမရတော့။ ခါးကို ကော့ထားသဖွငျ့ အနျထှကျလာသော စောကျ ဖုတျ အသားစိုငျကွီးက နဲနဲနှောနှောကွီးမဟုတျ…အလယျကှဲကွောငျးစပျကွားမှ ခပျဟဟပွူးထှကျနသေော စောကျစိကွီးက လကျ ဆဈခနျ့ရှညျ သညျ။ စောကျမှေးအခြို့က ပေါငျခွံအထိ ခပျပါးပါးရှိသညျ။ “ မငျး ဟာကွီးကလဲ သေးမှမသေးပဲ မသေီ…” “ ဟငျး… ဟငျး…ဒါမထသေးဘူး….သဘောပေါကျ…” အမလေး ထမြားထရငျတော့ ဒါကွီးအကျကှဲလာလမေလား မဆိုနိုငျ။ ခဈြထှနျးက မေ သီ့ စောကျပတျကွီးကို ခပျရှရှ ကိုငျကွညျ့ကာနစေဉျ… “ ကဲ…ကိုကျစားမှာလဲ မဟုတျဘဲနဲ့ ဖယျတော့…” မသေီက ငွိမျ့ညောငျးစှာ ကိုယျကို တပတျလှညျ့ပွီး ခဈြထှနျးရှေ့၌ဖငျကို ကားပွီး ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ အောကျခွေ ရှငျးရှငျးနှငျ့ စောကျပတျကွီးက ဖငျကွား မှ အနောကျသို့ အုံလိုကျကွီး ပွူးထှကျလာသညျ။ “ အကိုကလဲ အဟငျ့…ဘာလို့ အကွာကွီး စိုကျကွညျ့နရေတာလဲ လုပျမယျ့ဟာ ကို မလုပျသေးဘဲနဲ့…” ခြှဲတဲတဲ နှာသံလေးနှငျ့ တီးတိုးပွောလိုကျသော မသေီ၏ စကားကိုကွားမှ ခဈြထှနျးက မသေီ၏ ဖငျနောကျ နားသို့ တိုးကပျပွီး ရပျလိုကျသညျ။
ကားဂိုဒေါငျအပွငျဖကျ တိုကျကွီးနှငျ့ ဆကျသှယျထားသော လူသှားလမျးလေးအတိုငျး လကျနှိပျမီးသေးသေးလေးဖွငျ့ အသုံးပွု၍ အရိပျတဈခုက ကားဂိုဒေါငျဆီသို့ ခဉျြးကပျ၍လာသညျ။ တကယျဆို ထိုလကျနှိပျမီးရောငျလေးကို ခဈြထှနျးရှိရာ ပွတငျးပေါကျမှ မွငျနိုငျသညျ။ သို့သျောလညျး ခဈြထှနျး အာရုံက မသေီ စောကျပတျကွီးပျေါ၌သာ ရောကျနသေဖွငျ့ မီးရောငျ ကို သတိမထားမိလိုကျ ခြေ။ မသေီက သူမ၏ကွီးမားလှသော တငျပါးကွီးနှဈလုံးကို ဘယျညာယိမျးနှဲ့ရငျး ဆော့ကစားနရော တောငျနသေော ခဈြထှနျး၏ လီးတနျကွီးနှငျ့ မသေီ၏ စောကျပတျကွီးမှာ မထိတထိဖွငျ့ ယမျးခါနသေညျ။ တဈခကျြ တဈခကျြ မသေီက ခဈြထှနျး၏ လီးကွီးကို စောကျပတျအောကျသို့ လြှိုသှငျးထားပွီး ပေါငျနှဈလုံးနှငျ့ ညှပျခါ ရှတေို့းနောကျဆုတျ လုပျနသေဖွငျ့ လီးကွီးမှာ မခငျြ့မရဲကွီး ဖွဈလာပွီး ခဈြထှနျးကိုယျတိုငျမှာလညျး ရှုးရှုးရှဲရှဲ အသံတှေ ထှကျလာသညျ။
“ ခဈ…ခဈ….ခဈ….မာနျထလာပွီ…ခဈခဈ…” ခဈြထှနျး၏ လကျနှဈဖကျက မသေီ၏ ဖငျကွီးတှကေိုကိုငျရငျး လီးနှငျ့စောကျပတျ တဲ့တဲ့ဖွဈရနျ ကွိုးစားနရေငျး နှာမှုတျသံကွီးက ပွငျးထနျ၍လာသညျ။ မသေီက သဘောကပြွီး တခဈခဈရယျရငျးပွောသညျ။ “ နငျ့ ဖငျက ငွိမျငွိမျနစေမျးဟာ…” “ အိုး….ဝငျအောငျလုပျပေါ့လို့…ခဈ…ခဈ…” မသေီက ဆော့ကစားနညျး တဈခုဟူ၍ပငျ သတျမှတျနေ သလားမသိပါ။ ခဈြထှနျးကို ပွောငျစပျစပျပွောရငျး လီးတနျ ကွီးကို စောကျဖုတျဝသို့ မဝငျအောငျ နိမျ့ခြီမွငျ့ခြီဖွငျ့၎င်းငျး၊ ဘယျညာ ရမျးခါ၍၎င်းငျး ရှောငျတိမျးနရော ခဈြထှနျး ကြှဲမွီးတိုလာ သညျ။ ခပျဖှဖှကိုငျထားသော မသေီ၏ ခါးသေးသေးလေးကို သူ့လကျကွီး ဖွငျ့ တငျးကွပျစှာ စုံကိုငျဆုတျယူပွီး ရမျးခါနသေော ဖငျကွီးကို ထိနျးခြုပျလကျြ ဖငျကွားထဲမှ နောကျသို့ပွူးထှကျနသေော စောကျ ပတျအုံကွီးကွားသို့ လီးထိပျကွီးကို မရမက ဇှတျသှငျးလိုကျသညျ။
“ ဗွှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…” “ အ…အဟ…ကြှတျ…ကြှတျ…အကိုကလဲ တအားပဲ…” “ နငျက ငွိမျငွိမျမှ မနတော…” “ ခဈြလို့ ကြီစား တာပဲ ဟာကို…” “ ငါက မနနေိုငျတော့ဘူး ဟ…” “ အ….ဟငျ…အကိုကလဲ ထနျသလားမမေးနဲ့….အ…အား…ကြှတျ… ကြှတျ….ကြှတျ….အဝငျကွမျးတယျကှာ….. အကို့ လီးထိပျဖူးကွီးက တျောတျောမာတာပဲ ရှီး…အ….” မသေီ၏ စောကျပတျထဲသို့ လီးတနျကွီးကို တရှရှေ့စေို့ကျခနြရော မသေီကို စကားပွနျမပွောနိုငျခြေ။ “ ဗွဈ…ပလဈ…ပွဈ…ဗွဈ…” “ ဟား…အား…ရှညျလြှား လိုကျတာ အကိုရာ အကို့ဟာကွီးက မဆုံးသေးဘူးလား….အိုး…အိုး…ကြှတျ….ကြှတျ…. လညျပငျးမှာတောငျ တဈဆို့ဆို့ကွီး ဖွဈလာပွီကှာ….” “ အဆုံးဝငျလား…မသေီ…” “ အိ…အ…ဝငျတယျ….ဝငျတယျ…အဆုံးပဲ….အိ…အ….” မသေီ၏ ဖငျကွီးမှာ မ ရမျးနိုငျတော့၊ မဆော့နိုငျတော့ခြေ။ တငျးကွပျသော လီးတနျကွီးက စောကျဖုတျအုံကွီးတဈခု လုံး ပွညျ့ကွပျသှားအောငျပငျ တိုးဝငျ နဆေဲ…။
“ အား…အ….နအေုံး….နအေုံး….အမလေး…တအားနာလာပွီ အကို….ခဏလေး….ခဏလေး….” “ ဘယျလိုလုပျအုံးမလို့လဲ မေ သီ…” “ တံတှေးနဲနဲစှတျမှ ခံနိုငျမှာ နပေါအုံး….” မသေီက နီရဲသော နှုတျခမျးစိုစိုလေးကွားမှ တံတှေးအနညျးငယျကို စှတျယူပွီး လီး ကွီးနှငျ့ စောကျပတျကွားသို့ စိမျ့ ဝငျအောငျ လကျပွနျကိုငျပွီးပှတျသပျပေးလိုကျသညျ။ “ ဖွေးဖွေးနျော အကို….တအားနာရငျတော့ မသေီ အျောမှာ သိလား…” “ အေးပါ…ပေါငျနညျးနညျး ထပျကားလိုကျ ဟုတျပွီ….” အမှောငျထုထဲမှ မီးရောငျငယျသညျ ကားရုံ၏ နောကျဖကျ အခနျးဘေးတှငျ မှိတျသှားကာ ငွိမျသကျသှားသညျ။ အခနျးထဲမှ မပီဝိုးတဝါး စကားအခြို့ကွားလိုကျရစဉျ အရိပျက ငွိမျ သကျခါ အခနျးတှငျးသို့ ခြောငျးကွညျ့လိုကျသညျ။ ကောငျမ လေး တကိုယျလုံး အဝတျမရှိ ကုတငျဘောငျကို လကျထောကျပွီး ဖငျ ကွီးကုနျးထားသောကွောငျ့ နို့ကွီးနှဈလုံးက တှဲလှဲ လှုပျ ရမျးနသေညျ။ ကောငျမလေး ဖငျနားတှငျ မကျြနှာကွီး ငုံ့လကျြ လကျနှဈဖကျ က ခါးနှဈဖကျကို စုံကိုငျကာ လီးတနျတဈဝကျခနျ့ ဝငျနသေော စောကျပတျထှားထှားကွီးကို စိုကျကွညျ့နသေူက ခဈြထှနျးဖွဈ နသေညျ။
သီတာ ပါးစပျလေးကို လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ အထိတျတလနျ့လေး ပိတျလိုကျမိသညျ။ “ နာတယျ…နာတယျ…အကို မသေီ မခံ နိုငျဘူး…အကို့ဟာကွီးကို တဝကျပဲ လိုးပါ အကိုရယျ….” သီတာ နားတှေ ထူပူကုနျသညျ။ သီတာသညျ အိမျထောငျရှငျမတဈ ယောကျဖွဈသျောလညျး သညျလို တခွားမိနျးမ နှငျ့ ယောကျြားတို့ လိုးသောမွငျကှငျးမြိုး တခါမှ မမွငျဖူးခဲ့ခြေ။ “ အား….အား….နာ ပါတယျဆိုမှ အဆုံးထိ သှငျးနပွေနျပွီ….ကြှတျ….ကြှတျ….ကြှတျ….” မသေီဟုချေါသော မိနျးမငယျလေးက သူမ၏ ဖငျကွီးကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ ဆကျခါ ဆကျခါပှတျရငျး ငိုမဲ့မဲ့လေး ပွော နလေငျ့ကစား ခဈြထှနျးက မသေီ၏ ခါးသေးသေးလေးကို ကဈြကဈြ ပါအောငျ ဆုတျလိုကျပွီး သူ၏ ပွောငျလကျနသေော လီး တနျကွီးကို မသေီ၏ စောကျပတျထဲသို့ ပကျကြိသှားနှုနျးမြိုးဖွငျ့ လိုး သှငျး၍နသေညျ။ “ အမလေး…အ….အီး….သပေါပွီနျော….ဟငျး….ဟငျး….မသေီ့ကို သနားပါအုံး အကိုရယျ….” အသံလေးက တိုးတိုးလေးပဲဖွဈသညျ။ သို့သျော သီတာ ကောငျးကောငျးကွားနရေသညျ။ သီတာ၏ ခွတှေေ လကျ တှေ အေးစကျလာသညျ။ နှလုံးခုနျနှုနျးလညျး မွနျလာနသေညျမို့ ကိုယျပါရောပွီး အလိုလိုမောလာသညျ။ နားထငျစပျမှ ခြှေးသီးလေးမြား စို့ထှကျလာကာ အာခေါငျတှခွေောကျကပျလာပွီး တံတှေးလေး မွိုခလြိုကျရသညျ။
“ ဗွှတျ….ဘှတျ….” “ အ…ကှဲပွီ….ကှဲပွီ….ဒုက်ခပါပဲ ရှီး….ကြှတျ….ကြှတျ….” ကောငျမလေး ခါးလေးကုနျးထလာပွီး သူမ၏ စောကျပတျကို ဗိုကျအောကျသို့ သှငျးသညျ။ လီးကွီးက အနညျးငယျ ပွနျထှကျလာသညျ။ “ ငွိမျငွိမျနစေမျးပါ ဟ…ဆုံးပဲ ဆုံးနေ ပွီ….” “ မခံနိုငျဘူး….မခံနိုငျဘူး….ဟူး…ဟူး….ဟူး….” သီတာ ခြောငျးကွညျ့နသေညျ။ အသားတှေ တဆတျဆတျတုနျလာသညျ။ ဒူးတှေ ကှေးညှတျခငျြလာသညျ။ လမှေး မဲမဲကွီးမြားက အုံကောငျးလှပွီး ညိုထှားလှစှာသော ခဈြထှနျး၏ လီးကွီးကိုလညျး တအံ့ တအောလေး စူးစိုကျကွညျ့နမေိ သညျ။ “ အငျ့….အငျ့….အငျ့…အ…အ…” “ ပွှတျ…ဗွဈ….ပွဈ…ပွှတျ….” ခဈြထှနျး မီးကုနျယမျးကုနျ ဒလစပျဆောငျ့၍နရော ဂှေးစိကွီးနှဈလုံးက မသေီဆီးခုံအထိ ကော့ကော့ပွီး ဖြောကျကနဲ ဖတျြကနဲ ရိုကျသညျ။
ပွှတျကနဲ ပွဈကနဲ အသံလေးတှကေ သုံးလေးခကျြ ဆောငျ့မှ တဈခါထှကျလာတတျသညျ။ မသေီ ဆိုသော ကောငျမလေးက ကု တငျဘောငျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ တငျးတငျးဆုတျကိုငျပွီး မကျြလုံးလေးကို စုံမှိတျပွီး နှုတျခမျး လေးကို ကိုကျလကျြ ခေါငျးလေးကို မော့ထားရှာသညျ။ မသေီ၏ နှုတျခမျးအစုံ တငျးတငျးလေးစထေ့ားသညျ့ကွားမှ လညျခြောငျးသံတအငျ့အငျ့က ဆောငျ့ဆောငျ့ထှကျ လာသညျ။ သီတာတဈယောကျ ဘာမှ သတိမရဘဲ ဆကျလကျခြောငျး မွောငျးနမေိပရော အားရစရာကောငျးလှသော ကြားကြား ယားယားရှိသညျ့ ခဈြထှနျး၏လီးကွီးက သီတာ၏ ရငျထဲ၌ အရိပျ ထငျစှဲကနျြခဲ့ပတေော့သညျ။
သီတာဆိုတာက အခွားမဟုတျပေ။ ဒီအိမျ၏ အိမျကွီးရှငျ ဦးထူးကြျော၏ ဇနီးဖွဈသ ညျ။ သမီးတဈယောကျအမေ ဖွဈပွီး အသကျ က (၃၂)နှဈရှိပွီဖွဈသညျ။ ဦးထူးကြျောနှငျ့ သီတာတို့မှာ ခဈြထှနျး၏ အလုပျရှငျဟုလညျး ပွော၍ရသညျ။ သူငယျခငျြးဟူ၍လညျး ပွော၍ရသညျ။ ထူးကြျောနှငျ့ ခဈြထှနျးက ငယျသူငယျခငျြးတှဖွေဈသညျ။ ထူးကြျောအလုပျမှနျသမြှကို ခဈြထှနျးက အားလုံး ဝိုငျးဝနျး၍ လုပျပေးခဲ့သညျမှာ ထူးကြျော အိမျထောငျမကမြှီ ကတညျးကပငျဖွဈသညျ။ ခဈြထှနျးက ကားက အစ မောငျး၍ပေးသညျ။ အရငျက ထူးကြျောနှငျ့ ခဈြထှနျးတို့ တိုကျကွီးပျေါတှငျ အတူနခေဲ့ကွသညျ။ နောကျ ထူးကြျော အိမျထောငျကြ သှားတော့ ခဈြထှနျးက ကားရုံထဲတှငျ ဆငျး၍နခေဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ လှနျခဲ့သော (၄)လခနျ့ကတော့ ထူးကြျောတဈယောကျ ကားအကျ စီးဒငျ့ဖွဈကာ ကှယျလှနျသှားခဲ့ရရှာသညျ။
သီတာက သူမရှမှေ့ မွငျကှငျးကို စူးစူးရဲရဲကွညျ့နလေသေညျ။ ခဈြထှနျးက အဆကျမပွတျ ဆောငျ့၍ -ိုးနသေော အခါ မသေီက သူမ၏ ဖငျကွီးကို နောကျသို့ စညျးခကျြဝါးခကျြကကြလြေး ပွနျ၍ဆောငျ့ပေးနသေညျ။ “ အား….ရှီး….ကောငျးလိုကျတာ ကိုကို ရယျ….” မသေီက မကျြတောငျလေး မှေးပွီး အဈတဈတဈအသံလေးနှငျ့ ပွောလိုကျသံကို ကွားရသောအခါ သီတာ၏ စိတျထဲမှ မသေီကို နရေငျးထိုငျရငျး အတျော စောကျမွငျကပျသှားမိသညျ။ “ အခုနကတော့ သတေော့မယျ့အတိုငျး…” ဟု စိတျထဲမှ မကမြေ နပျရရှေတျနမေိသညျ။ “ ထှကျ…ထှကျကုနျပွီ ကိုကို….အ….အ…” “ အငျ့….အငျ့….အငျ့….ကဲကှာ…ကဲကှာ….”
ခဈြထှနျးကလညျး လကျမောငျးကွောကွီးတှေ ထောငျထလာအောငျ မသေီ၏ ခါးလေးကို တအားဆုတျကိုငျဆှဲယူပွီး လီးတနျကွီး ကို အဆုံးဖိ၍ ဆောငျ့ခလြိုကျပွီး ခဈြထှနျး၏ လီးတနျကွီးကလညျး မသေီ၏ စောကျပတျထဲသို့ အတငျးဖိကပျ၍ ခဈြထှနျး၏ ကိုယျ ကွီးသညျ တဆတျဆတျဖွဈသှားရလသေညျ။သီတာ ခြာကနဲ လှညျ့၍ ထှကျခဲ့သညျ။ သူမ၏ ရငျထဲတှငျတော့ ခဈြထှနျးသညျ သံခြောငျးကွီးအလားရှိသညျ့ ထှားကွိုငျးအကျကှဲ၍နသေော လီးတနျကွီးတဈခြောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားသော ယောကျြားပီသသူတဈ ဦးဖွဈပါလလေားဟု တုနျတုနျယငျယငျလေးပငျ တှေးမိလိုကျလတေော့သညျ။
(၂) ထူးကြျော ဆုံးပွီးကတညျးက သီတာတဈယောကျ နစေ့ဉျလို မကျြရညျနှငျ့ မကျြခှကျဖွဈနရှောသညျ။ မိခငျဖွဈသူ နစေ့ဉျ ငို နသေညျမို့လညျး ရှယျလီ လေးခမြာ အခြော့ခံရမညျ့အစား သူမ ကပငျ မိခငျဖွဈသူ သီတာကို ပွနျ၍ ခြော့မော့ရမလို ဖွဈနသေညျ။ အဆိုးဆုံးကား သီတာ အရကျသောကျတတျလာ၏။ “ သီတာ…အရကျသောကျတတျလာတာတော့ မကောငျးဘူး…” “ အျော… အျော….ကိုခဈြထှနျးက ကမြကို သတိပေးဖျောရသေးသားပဲ….အဟတျဟတျ….” ဒီနလေ့ညျး သီတာ တဈယောကျ ထုံးစံအတိုငျး မူး နပွေနျသညျ။ “ ကနြျောက စတေနာနဲ့ သတိပေးတာပါ သီတာ…” “ စတေနာ….ဟလား…သီတာ့ကို ရှငျဘယျလောကျအထိ နားလညျထားသလဲ ကိုခဈြထှနျး…” မှေးစငျးထားသော မကျြတောငျကော့ကွီးမြားဖွငျ့ သီတာက ခဈြထှနျးကို ခပျငေါ့ငေါ့မေးလိုကျ သညျ။
“ ကနြျောက သီတာတို့လို ပညာတတျ တဈယောကျမဟုတျပါဘူး သီတာ…ရှငျးရှငျးပွောရရငျ သီတာ့ကို သနားမိလို့ ပါ…သသေူက ပွနျရှငျရိုးမှ မရှိတာဘဲ….သီတာ…” “ အဲဒါကွောငျ့ ကမြ ဒုက်ခလှလှတှတေ့ာပေါ့…ဟငျး…ဟငျး…သူ့ကွောငျ့ ကမြ ဘယျလိုဒုက်ခတှေ ခံစားနရေတယျဆိုတာကိုရော ရှငျသဘောပေါကျသလား ကိုခဈြထှနျး…ဟငျ…ပွောစမျးပါ….” “ အာ….ပေါကျတာ ပေါ့….သီတာ….ပေါကျပါတယျ…လငျယောကျြားတဈယောကျ ဆုံးရှုံးရတဲ့ မိနျးမသားတဈယောကျ ဟာ လုံခွုံမှု အားကိုးမှုတှေ ကှယျပြောကျကုနျတာပေါ့….ဒါပဲလေ…” “ ဟား….ကိုခဈြထှနျး ရှငျဟာ ကမြထငျတာထကျ ပိုညံ့တယျ….အတျောလေးညံ့ တယျ….သိလား….” “ ဗြာ….” “ မဗြာနဲ့လေ….သိက်ခာတှေ သမာဓိတှနေဲ့ အရှကျအကွောကျတှကွေားမှာ ကမြရဲ့ ခန်ဓာကိုယျက ကာမဆန်ဒကို ဘယျ လိုအစားထိုးရမှာလဲ….” “ သီတာ…” ပုံမှနျလညျပတျ၍နသေော ကမ်ဘာကွီးသညျ ရုတျခညျြး ရပျတနျ့၍သှား သညျ။ ခဈြထှနျး အလနျ့တကွား အျောလိုကျ သညျ။ သီတာကိုလညျး အံ့သွ နှမွောတသစှာသော မကျြလုံးဖွငျ့ ကွညျ့သညျ။
“ ဟငျး….ဟငျး….ကိုခဈြထှနျး သီတာကို အထငျသေးသှားပွီ မဟုတျလား….ဟငျး….ဟငျး….ဒါပါဘဲ လောကကွီးက သဘာဝရဲ့ အမှနျတရားတခြို့ကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး ပွောဆိုဖို့ ခှငျ့မပေးပါဘူးလေ…..မဟုတျဖူးလား….ဒီတော့ ကမြ ညဈတယျ… ဖောကျပွနျတယျ….တဏှာကွီးတဲ့ မိနျးမစာရငျးထဲလညျး ကမြ မပါခငျြဘူး တဏှာကွီးသူ မဖွဈခငျြဘူး….ဒီတော့ သောကျတယျ မူး တယျ မူးတော့ မမေ့ယျ ဒါကွောငျ့ သောကျတယျ….” သီတာ ခဈြထှနျးကို မထမေကျြမွငျ တဲ့တဲ့ပွုံးပွပွီး အရကျခှကျကို မော့၍ သောကျခလြိုကျသညျ။ တကျတကျစငျသှား သော အရကျဖနျခှကျထဲသို့ အရကျထပျဖွညျ့ရနျအတှကျ ပုလငျးကို လကျလှမျးလိုကျ ပွနျသညျ။ “ တျောပွီ….သီတာ….သီတာ လှနျနပွေီ…” ခဈြထှနျးက ဖွူလှသှယျလြှသော သီတာ၏ လကျလေးကို ဆတျကနဲ အပျေါမှ အုပျကိုငျပွီး ဟနျ့တားသညျ။ သီတာက သူ့လကျကို ခပျတငျးတငျး ဆုတျကိုငျထားသော ခဈြထှနျး၏ မကျြနှာကို ဆတျကနဲ မော့ကွညျ့သညျ။
“ ရှငျ….ကမြ အသားကို မထိနဲ့ ကိုခဈြထှနျး….” “ သီတာ….ထပျမသောကျနဲ့လေ….” “ ဒါ ကမြ အခှငျ့အရေးပါ….ရှငျ့ အပူမပါဘူး ” “ သီတာ့ အတှကျ ကနြျော တားနရေတာပါ….” “ ဟငျး….ဟငျး….ဟငျး….ကိုခဈြထှနျး ရှငျဟာ အတျောမတရားတဲ့သူ ဘဲ….ဟငျး….ကမြ အရကျသောကျတာကို တားတယျနျော….ဟိုကားရုံက အခနျးထဲမှာ ရှငျ ကောငျမလေးတဈယောကျကို တဈည လုံးချေါပွီး လုပျနတောကတြော့ အဲ့ဒါ လူကောငျးတဈယောကျရဲ့ အကငျြ့လား ကိုခဈြထှနျး….” ခဈြထှနျးက ဆုတျကိုငျထားသော သီတာလကျလေးကို ကယောငျကတမျးလှတျလိုကျမိရငျး ကုနျးထားသော ခါးကို ဆနျ့၍ ရပျလိုကျသညျ။ “ ပွောလေ….ကိုခဈြထှနျး ” “ ကနြျောက ယောကျြားလေးပါ သီတာ…” “ အျော….အျော….ယောကျလြားတော့ ဖာခလြို့ရတယျ မိနျးမက ယောကျြားကို ခံခငျြ တယျဆိုတော့ ဘယျလိုလုပျကွ သလဲဟငျ….” “ တျောတော့ သီတာ….သီတာ သိပျမူးနပွေီ….” ခဈြထှနျး၏ စိတျထဲ၌ မကွာမီ တစုံ တရာ အမှားအယှငျးကွီး မှားယှငျးသှားမညျကို စိုးရိမျသှားသညျ။ သီတာ သောကျမညျ့ အရကျခှကျကို ခဈြထှနျးက အမှတျမဲ့လိုဖွငျ့ တိုကျခလြိုကျသညျ။
“ ယောကျြားတှေ မူးသလို မိနျးမတှရေော မူးလို့ မရဘူးလား ကိုခဈြထှနျး….ရမျးလို့မရဘူးလားဟငျ….ကိုယျလုပျခငျြ တာကို စှပျပွီး လုပျပဈဖို့ လောကကွီးက ဘာလို့ခှငျ့မပွုတာလဲဟငျ….” ဒေါသနှငျ့ ဒယိမျးဒယိုငျထရပျရငျး အျောပွောလိုကျသော သီတာတဈ ယောကျ ဆိုဖာပျေါသို့ ဝရုနျးသုနျးကား ပွနျပွီးလဲ ကသြှားရာ သူမ၏ ခပျရော့ရော့ထဘီလေးက ဖတျြကနဲ ကြှတျပွီး ပေါငျလညျထိ လြှောဆငျးသှား၏။ ဆီးခုံမှ မှေးညှငျးနုနုနှငျ့ အိဝငျးမှညျ့တငျးနသေော တငျပါးကွီးအစုံက မိမှေးတိုငျ ဖမှေးတိုငျးဖွဈကာ ခဈြထှနျး၏ မကျြလုံးမြားကို ပွူးကယျြသှားစေ သညျ။ “ ကိုခဈြထှနျး….” “ ဗြာ….သီတာ….” “ ရှငျ သီတာကို မသနားဘူးလား ဟငျ….” “ သ..သနားပါတယျ….သီတာ…” “ ကမြကို နားရောလညျပွီလား ဟငျ….” ငိုသံအကျအကျလေးနှငျ့ ပွောရငျး သီတာ၏ လကျလေးတဈဖကျက သူမ၏ စောကျမှေးလေးမြားကို ရှရှလေးပှတျ၏။ ဆိုဖာကို ကြောမှီထားရငျး အခွားလကျတဈဖကျဖွငျ့ လညျး ဝငျးစကျစကျ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ဆှဲလှနျလိုကျသညျ။
“ ပွောလေ…ကိုခဈြထှနျး….” “ နား….နားလညျပါတယျ….သီတာရယျ…” ခဈြထှနျး၏ ဒူးတှေ တဆတျဆတျတုနျနသေညျ။ အိအိစို စို ခန်ဓာကိုယျမယျလေး၏ ရာဂခိုးဝသေော မကျြလုံးအစုံကိုပငျ သူရငျမဆိုငျရဲပေ။ မဖွဈစဖူး ရငျခုံသံကွီးက ကယျြလောငျစှာ ထှကျ ပျေါလာပွီး အလိုလိုနရေငျး ရငျမောလာသညျ။ ကြောကျ ရုပျကွီးတဈရုပျနှယျ ခွစေုံရပျကာ လကျနှဈဖကျကို ဆနျ့ဆနျ့ကွီးခရြပျနေ သော ခဈြထှနျး၏ ပုဆိုးကွားမှ တစုံတရာသညျ ထောငျ၍ထကာ ရှသေို့ငေါထှကျလာသညျ။ သီတာက ဒါကို မွငျသညျ။ ပွုံးရိပျ လေးသနျးနသေညျ။ ဗိုကျအောကျမှ ကှေးဆငျး ငုံ့ဝငျနသေော စောကျပတျလေးကို အထကျသို့ကော့တငျပဈလိုကျပွနျသညျ။ အသား ဆှတျဆှတျဖွူသော သီတာ၏ စောကျပတျကွီးမှာ ဖောငျးအိစှငျ့ကားနပွေီး စောကျပတျတဈခွမျးကို လကျကလေးနှငျ့ မသိမသာဆှဲ ဖွဲထားသဖွငျ့ ရဲနသေော အတှငျးသားနီနီလေးကို ကွညျ့ရငျး ခဈြထှနျး တံတှေးကို ဂလုကနဲ မွိုခလြိုကျမိလသေညျ။
ထိုငျးကနဲ ထောငျးကနဲ အခြုပျအထိနျးမရှိ ထောငျလာသော လီးတနျကွီးက ပုဆိုးကွားမှ အရုပျဆိုးစှာ ထိုးထှကျလာ ပါလသေညျ။ ခဈြထှနျး၏ ခွအေစုံက မူလီစုပျထားသလို မရှေ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးကသာ သံလိုကျအား အဆှဲခံရသော သံထညျ ကွီးတဈခုလိုရှသေို့ ငိုကျငိုကျသှားလိုကျ ပွနျပွီး တငျးမတျလာလိုကျဖွဈနသေညျ။ “ ရှငျ….ကမြကို နားလညျတယျဆို….” အဈတဈတဈ တိုးအကျအကျ အသံလေးက ရှတတလေး တိုးညှငျးငွိမျသကျစှာ ပျေါလာသညျ။ ခဈြထှနျးစိုကျကွညျ့နေ သညျ့ စောကျပတျဖှေးဖှေးကွီး၏ အကှဲကွောငျးရဲရဲလေးထဲမှ စောကျစနေီ့နီလေး။ “ လာလေ….ကိုခဈြထှနျး…” သံလိုကျဆှဲငငျအားထကျ ပွငျးသော ဣတ်ထိယ ဆှဲငငျအားကွောငျ့ ခဈြထှနျးသညျ သီတာရှိရာသို့ ဒရှတျတိုကျကွီး ရှလြေ့ားရောကျရှိသှားသညျ။ သီတာက ခဈြထှနျး၏ ပုဆိုးကို ဆှဲ၍ခြှတျခလြိုကျသညျ။ ဒိုငျးကနဲ ပုဆိုးကွားမှ ကနျထှကျလာ သော ကွီးမားတငျးပွောငျနသေော လီးတနျကွီးကို သီတာက ဖောငျး ကဈဖွူဖှေး၍ သှယျလြှနသေော သူမ၏ လကျခြောငျး လေးမြားဖွငျ့ အထကျအောကျဆငျ့ကာ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဖှဖှလေး ဆုတျကိုငျ လိုကျပွီး လီးတနျကွီးကို ဖွဲခလြိုကျသညျ။ လီးတနျကွီး၏ ထိပျဖူးကွီးက ညိုမဲနပွေီး အတှငျးပိုငျး ဒဈအောကျခွေ၌ အနညျးငယျနီ ရောငျသနျးနသေညျ။ ဆုတျကိုငျထား သော သီတာ၏ လကျလေးနှဈဖကျ အတှငျး၌ လီးကွီးမှာ လြှံထှကျနသေညျ။ တဈပတျဆုတျ၍ မနိုငျအောငျ လုံးပတျကွီးက ထှားကွိုငျးလှသညျ။
“ ရှငျဟာ ယောကျြားပီသလှနျးသူ တဈယောကျပဲ ရှငျ…” သီတာက အသိတရားမဲ့သော ကာမနှံအတှငျးသို့ တရဈရဈတိုးဆငျး နဈမွုပျစပွုလာသညျ။ ရှမျးစိုနီရဲသော နှုတျခမျး လေးအစုံဖွငျ့ လီးတနျကွီးကို ငုံလိုကျကာ အတှငျး၌ လြှာဖြားလေးဖွငျ့ မထိတထိ လေး ကလိ၏။ “ အ…..ကြှတျ….အငျး….အငျး….အငျး….သီတာရယျ….” ခဈြထှနျး၏ လကျနှဈဖကျက သီတာ၏ နောကျကြောမှ ဆိုဖာကြောမှီကို ဆတျကနဲ လှမျး၍ ထောကျလိုကျသညျ။ ဆီးခုံကွီးပျေါ၌ ထောငျထနသေော လမှေးကွီးမြားမှာ ရှဲကနဲ ထောငျထ သှားပွီး ထောငျထ အုံကွှကုနျသညျ။ ပေါငျခွံတဝိုကျ သာမက ဖငျကွီးမြားပါ ကွကျသီးလေးမြား အစီအရီပျေါထှကျလာကွသညျ။ သီတာက ပါးစပျအတှငျးမှ ဒဈကွီးကို အသာပွနျ ဆုတျပွီး ဒဈခြိုငျ့ထဲသို့ လြှာဖြားလေးဖွငျ့ ခပျဖိဖိလေး ထိုးဖိကာ ရဈဝိုကျကစား လိုကျသောအခါ…. “ အား….အား…..သီတာ….သီတာ….ရယျ….အဟငျး….ဟငျး…..” ခဈြထှနျး၏ ပေါငျကွီးနှဈဖကျက ဘေးသို့ ကားသှားပွီး သီတာ၏ ပါးစပျလေးထဲသို့ လီးကို ဖိသှငျးလိုကျမိ၏။ လကျနှဈ ဖကျဖွငျ့ တငျးတငျးဆုတျကိုငျထားမှုကွောငျ့ လီးကွီး က သီတာ၏ ပါးစပျထဲသို့ (၂)လကျမခနျ့သာ ဝငျသှား၏။ သီတာက လီး ထိပျဖူးကွီးကို မိမိရရစုပျထားပွီး သူ၏ လြှာလေးကို မာကြ ဈလြှကျ ဒဈကွီးကို ဝိုကျ၍၎င်းငျး ထိပျဖူးကွီးကို လြှာဖြားဖွငျ့ ထိုးလိုကျ လြှာပွားဖွငျ့ ယကျလိုကျ လုပျပေးသညျ။
“ ဟား….အား….အို့အိုး….ကြှတျ….ကြှတျ….ကြှတျ…..” ခဈြထှနျး၏ မကျြနှာကွီးက မကျြနှာကကျြဆီသို့ မော့လိုကျ သီတာလုပျနေ ပုံကို ငုံ့ကွညျ့လိုကျဖွငျ့ ဂဏာမငွိမျအောငျ ဖွဈနပွေီး နှုတျခမျးကိုလညျး လြှာဖွငျ့ အကွိမျကွိမျယကျနမေိသညျ။ လီးတနျကွီးကမူလ ထကျ (၂)ဆခနျ့ ထှားလာပွီး အံ့ဖှယျ ကောငျးလောကျအောငျပငျ မာကွောလာ၏။ အကွောမြား အပွိုငျးပွိုငျးထလာသညျ။ ခပျမော့ မော့ကွီး ထောငျနသေော လီးဒဈကွီးက မီးခြောငျးရောငျဖွငျ့ တဖွတျဖွတျတောကျပကာ တံတှေးလေးမြားဖွငျ့ စိုစှတျပွောငျတငျး လာသညျ။ “ ရှငျ….ဒီမှာထိုငျပါလား ကိုခဈြထှနျး…” သီတာက ခဈြထှနျးကို လေးယောကျထိုငျ ဆိုဖာကွီးပျေါ၌ ထိုငျခိုငျးသညျ။ ခဈြ ထှနျးကလညျး သံပတျပေးထားသော အရုပျတဈရုပျပမာ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ခဈြထှနျး၏ လီးတနျကွီးက ကိုးဆယျဒီဂရီ မတျတောငျ ပွီး ခေါငျးမော့လြှကျရှိသညျ။ သီတာက သူမထဘီကို ခွထေောကျမှ ခြှတျယူပွီး ဆိုဖာလကျတနျးပျေါသို့ တငျထားလိုကျသညျ။ ထဘီ မရှိသော သီတာ၏ အောကျပိုငျးကွီးက ယောကျြားနှငျ့ လေးလ လောကျဝေးသှားသညျ့အခြိနျမှာပငျ အားသဈအငျသဈတှနှေငျ့ ဖှံ့ဖွိုး စှငျ့ကားလြှကျ ပိုမိုတငျးမောကျလြှကျရှိလသေညျ။ သီတာ၏ ခွတေဈဖကျက ခဈြထှနျး၏ ခါးမှ ဖွတျလြှကျ ကြျောခှလိုကျစဉျ ကွမျး ရှရှ ခွဖေဝါး လေးနှငျ့ လီးထိပျကွီးကို တိုကျမိသှားသေးသညျ။
“ အို….ကနျတော့….” သီတာက ရုတျတရကျ တောငျးပနျရငျး ခဈြထှနျး၏ ပုခုံးနှဈဖကျကို သူမ၏ လကျလေးနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျကာ ခဈြထှနျး၏ လီးတဲ့တဲ့ပျေါသို့ စောကျပတျအဝကိုတပွေီ့း ဖွေးဖွေးခငျြးထိုငျခသြညျ။ “ ဗွဈ….ပွှတျ….ဗွဈ….ဘလှတျ….” “ အား….အား….နာတယျ….သိလား….” ခဈြထှနျးက သီတာ၏ ခါးလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဇတျကနဲ ဆုတျကိုငျရငျး ခပျတိုးတိုး အျောလိုကျသညျ။ သီတာက ကွားဟနျမတူ တငျးရငျးပွညျ့အငျ့စှာ လိုးသှငျးနသေော အရသာကို အံလေးကွိတျကာ ခံစားရငျး မကျြနှာကို အပျေါမော့ပွီး ဂှေးစိနှငျ့ ဖငျကွီးထိသညျအထိ ထိုငျခလြိုကျလသေညျ။ “ ဗွဈ….ဗွဈ….ဒုတျ….” “ အေ့….အငျး…..အငျး….” သီတာ၏ ဖငျကွီး ခကျြခငျြးပွနျကွှတကျသှားသညျ။ ရှညျလြှားသော လီးကွီးက စောကျခေါငျးနုနုလေးကို မာကွောစှာ ထိုးဆောငျ့မိသှားပုံရလသေညျ။ နို့ကွီးနှဈလုံးက ခဈြထှနျး၏ မကျြနှာရှဝေ့ယျ အိပဲ့ အိပဲ့နှငျ့ ရှိနသေညျမို့ ခဈြထှနျးက သီတာ၏ မကျမောဖှယျကောငျးလှသော နို့ကွီးနှဈလုံးကို တဈလုံးပွီးတဈလုံး အားရပါးရကွီးစို့နမေိသညျ။ သီတာ၏ ခန်ဓာကိုယျ အတှငျးမှ သှေးသားမြား စုပွုံပေါကျကှဲသှားသညျ။ စောကျခေါငျးထဲမှ အရမြေားက ဒလဟော ပွိုဆငျးလာကွသညျ။ ခဈြထှနျး၏ မာတငျး မာကွောနသေော အကွောတှထေနသေညျ့ လီးတနျကွီးကို တစတစ စိုစှတျပွောငျဝငျးသှားစသေညျ။ သီတာက ဇှတျကနဲ ဇှတျကနဲ ထိုငျခလြိုကျတိုငျး လီးကွီးထိပျဖြားက အစှမျးကုနျ ပွဲကားထားသော သီတာ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ တိုး၍ တိုး၍ သူမ၏ စောကျစလေ့ေးကို ဖိပှတျကာ ဝငျ၍သှားသညျ။
သီတာ၏ ဖငျသားကွီးမြားက အောကျမှ ဆိုဖာပျေါတှငျ ထိုငျနသေော ခဈြထှနျး၏ ပေါငျပျေါသို့ ထိုငျခမြိလြှကျပငျ ခဈြထှနျး၏ သနျမာသော လကျနှဈဖကျက သူမ၏ ဂြိုငျးအောကျမှ လြှို၍ သီတာ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ကွုံး၍ ဖကျလိုကျကာ မတျတပျရပျလိုကျ တော့ရာ သီတာ၏ ခွထေောကျလေးနှဈဖကျကလညျး ခဈြထှနျး၏ ခါးကွီးကို ခြိတျကိုငျညှပျလိုကျကာ သီတာ ခမြာ သနျမာထှားကွို ငျးသော ခဈြထှနျး၏ လီးကွီးပျေါ၌ ဒနျးစီးနရေသလို ခပျကော့ကော့လေးပါသှားလသေညျ။ “ ဘယျလို လိုးမလဲဟငျ….ကို ” “ စားပှဲပျေါကို တငျလိုးပေးမယျလေ….” “ အငျ….မကွိုကျပါဘူး….” သီတာက ခဈြထှနျး၏ လညျပငျးကို ဟီးလေးခိုကာ မကျြစောငျး လေးထိုးကာ နှုတျခမျးလေးကို စူတူတူလေး လုပျ၍ ပွောသညျ။ “ အို…ကဲပါ….ပထမ တဈခြီတော့ ကို ကွိုကျသလိုလုပျ….နောကျ တဈခြီကမြှ သီတာပွောသလိုလုပျ….ဒါပဲ….” ခဈြထှနျးက သူမကို ဒီအတိုငျးပငျထား၍ လကျတဈဖကျက သူမ၏ ခါးကို သိုငျးဖကျ ကာ လီးကွီးကို တဈခကျြ ညောငျ့ လိုကျသညျ။ “ ပွှတျ…” “ အငျ့….” “ ကဲပါ….အခုနက အကိုပွောသလိုပဲ စားပှဲပျေါတငျပွီး လုပျ ကွညျ့ လိုးကွညျ့အုံးလေ….” သီတာ၏ အပွောနှဲ့နှဲ့ တိုးတိုးလေးနှငျ့ သီတာ၏ အပွုံးနုနုခြှဲခြှဲလေးတှသေညျ ခဈြထှနျးကို တငျးတငျး ကွီး ရဈပတျနလေေ၏….
ညက တိတ်ဆိတ်လွန်း၍ အမှောင်က သိပ်သည်းလွန်းနေသည်။ ချစ်ထွန်း အပိုင်စားရထားသော ကားဂိုဒေါင်၏ နောက်ဖက် အိပ်ခန်းလေးထဲ၌မူ အပြာရောင် မီးပွင်းလေးက လင်းလက်၍နေသည်။ “ ဒါ အကို့ အိမ်လားဟင်…” “ ဟင့်အင်း….ကိုယ်က သူများဆီမှာ ကပ်နေရတာ…” “ အင်း…တော်တော် ချမ်းသာတာပဲ…” ကောင်မလေးက စကားတတ်ပြီး ဖေါ်ရွှေ၏။ ညဥ့်မယ်လေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ထွန်းက ညလုံးပေါက်ဆွဲလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ မင်း…ကိုယ့်ကို ဈေးမပြောရသေးဘူးနော်…” “ ငါးခုလေ… အဲဒီပေါက်ဈေးပဲ…” “ အဟဲ…ငါးရာလား…” “ အဲ…ဟယ်…ငါးထောင်လေ ဆရာကြီးရဲ့…” “ ကိုယ် တကယ်မသိလို့ပါ…အခုမှ မင်းကို ပထမဆုံး ခေါ်မိတာပါ…” “ သနားလိုက်ရတော့မလား…” “ မသနားပါနဲ့…ရပါတယ်….သုံးထောင်ဆို မရဘူးလား…”
“ အလိုလေးတော်…ဘာမှတ်လို့ ဈေးဆစ်နေရတာလဲ…တစ်ညလုံး ရှင်နဲ့နေရမယ့် ကျမဒုက္ခကိုလည်း ထည့်တွက် အုံး….” “ ငါး ထောင်ပဲလားကွာ…အဲဒါ…အကုန်ပဲ…” “ ဟင်း…ကျမတော့ ဖိတ်စာမှားပြီထင်တယ် ဒါနဲ့ ရှင်တစ်ယောက်ပဲ လုပ်ရမှာနော်…” “ တစ်ယောက်ထဲပါ…” “ အင်း တချို့က တစ်ယောက်ထဲဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ ဟိုရောက်တော့ လေးငါးခြောက်ယောက်ဖြစ်ရော ငွေ ကျတော့ အပြည့်မပေးချင်ဘူး…” “ ကိုယ်က အဲဒီလူယုတ်မာစာရင်းထဲ မပါ ပါဘူး…မနက်လေးနာရီထိုးတာနဲ့ မင်း ပြန်ပေါ့…” “ အနားယူခွင့်တော့ ရှိမှာပေါ့နော်…” “ မပြောတတ်ဘူး…ကျုပ်က အတော်ထန်နေတာ…” “ ဟင်း…ကြက်သီးတောင် ထလာပြီ…ကဲ ပါ အချိန်ဖြုန်းမနေနဲ့…ရှင့်အဝတ်တွေ အရင်ချွတ်….” “ မင်း အရင်ချွတ်ပေါ့…” “ ကဲလာ….အကိုက ကျမကို ချွတ်….ကျမက အကို့ ကို ချွတ်ပေးမယ်…ဟလား…” “ အော်…ငွေကြေးနဲ့ကာမကို ရောင်းဝယ်သူလေးတွေမို့ ဘာဆိုဘာမှ အခက်အခဲမရှိ စင်းလုံးချော လို့…” ချစ်ထွန်းက သူမ၏ အပေါ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အောက်ခံဘရာစီယာကိုပါ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ အ တွင်း မှာ မာတင်း၍ ဖွံ့ထွားသော ဖြူဖွေး၍နေသည့် နို့နှစ်လုံးက ရုန်းကန်၍ ထွက်လာသည်။
“ မင်း ဒီအလုပ် လုပ်တာ ကြာပြီလား…” “ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ…” “ မင်းနာမည် မပြောရသေးဘူးထင်တယ်…” “ အလကားပါ တခြား နာမည်တွေ ပြောမှာပေါ့…အပိုတွေ ပြောမနေပါနဲ့…” “ စကားပြောဖို့ လွယ်အောင်ပါ…” “ မေသီ…ပါ ” “ အော်…မေသီ အင်း…ဒါ နာမည်ပေါ့နော် ” “ ဟင်း…ဟင်း…သေချာပါတယ်…” မေသီ၏ မျက်နှာလေးက တလောကလုံးကို ထီမထင်သလို မျက်နှာပေး လေးနှင့် ဖြစ်လင့်ကစား မျက်လုံးလေးတွေ က ရီဝေ၍နေသည်။ ရွှန်းလဲ့၍နေသည်။ တောက်ပ၍နေသည်။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ရွှန်းလက်စိုပြေ၍ ဖူးလုံးနေသည်။ “ မင်း…ချောတော့ အတော်ချောတယ်…” “ အကို နှမြောလိုက်တာလို့ ပြောမလို့လား…အပို တွေ မပြောကြေးကွာ…မေသီ စိတ်ညစ်တယ်…” မေသီက ချစ်ထွန်း၏ ပုဆိုးစကို ဆွဲချွတ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပုံချလိုက်သောအခါ တွင်မူ သူမ၏ ပါးစပ်လေး ဟ သွား သည်။
“ အလိုလေး…လေး…မနဲမနောကြီးပါလားရှင့်…” မေသီက ခပ်ငိုက်ငိုက်ကြီး တွဲကျနေသော ချစ်ထွန်း၏ လီးကြီးကို လက်ကလေး နှင့် တယုတယလေး ဆွဲမသည်။ “ ကြီးလိုက်တာဟယ်…ချစ်စရာကြီး….ကြည့်ပါအုံး…” မေသီ၏ လက်ဖဝါးလေးပေါ်၌ အိပ်ပျော် နေသော မြွေပွေးတစ်ကောင်နှယ် စင်းစင်းကြီး ငြိမ်နေသော ချစ်ထွန်း၏ လီးထိပ်ဖူးကြီးမှာ ခပ်ညိုညိုဖြင့် တုတ်ခိုင်လှသည်။ “ မင်း ထဘီချွတ်ပေးမယ်လေ…” “ အင်း…ချွတ်လေ…ကျမတော့လေ အကို့ဟာကြီးတွေ့ပြီး ပြန်အမ်းချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ ကွယ်…” မေသီက မှိုရသူ မျက်နှာမျိုးလေးနှင့် ရွှန်းရွှန်းလဲ့လဲ့ ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည်။ ချစ်ထွန်း၏ လီးကြီးကိုလည်း လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် ဘယ်ညာပြောင်းကစားရင်း တခါတရံ ဂွေးစိကြီးကိုပါ ဖြစ်ညှစ်တတ်သည်။ လမွှေးများ ထူပိန်းနေသော ဆီးစပ်မှ ထိုးထွက် လာသော လီးတန်ကြီးသည် ဂွေးစိကြီးအောက်သို့ပင် ရောက်ကာ အမြောင်းလိုက်ကြီးဖြစ်၍နေသည်။ မေသီက လီးဒစ်ကြီးကို သူမ၏ လက်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းဖြင့် ညှပ်ကိုင်ကာ ဖြဲချပြီး အနီးကပ်ကြည့်သည်။
“ အကို့ ဟာကြီးက ထန်မယ့်ပုံပဲ သိလား…” “ ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်…” “ ဒစ်နက်တယ်…ထိပ်လုံးပြီး လုံးပတ်ထွားတယ်…အတန် ထက်တောင် နဲနဲကြီးနေသေးတယ်လေ…ဒါမျိုးကြီးတွေက မိန်းမသုံးလေးယောက်ကို တပြိုင်တည်း လုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစားပေါ့…” “ ပေါက်ပေါက် ရှာ…ရှာ…” ပြောလိုက်ပြီးချစ်ထွန်းက မေသီ၏ ခေါင်းလေးကို မနာအောင်ထုလိုက်သေးသည်။ “ ဟုတ်တယ် အကိုရဲ့ ယောက်ျားတွေ တန်ဆာကို လေ့လာထားမှ ကိုယ်နဲ့ အပေးအယူလုပ်မယ့် ယောက်ျား ဘာ အမျိုးအစားဆိုတာ သိထားရတာ ပေါ့…” “ ဟား…မင်းက အတော်ရင့်နေပြီပဲ…” ချစ်ထွန်းက မေသီ၏ စောက်ပတ်ကို စမ်းရင်းပြောသည်။ မေသီက ပေါင်ကြားထဲ ထိုးနှိုက်လာသော ချစ်ထွန်း၏ လက်ကို ပေါင်နှစ်ဖက်ကားပေးလိုက်ရင်း… “ မေသီ….ဒီအလုပ်ကို တစ်လမှ တစ်ခါပဲလုပ်တာပါ အကို…ပြီးတော့လဲ ရောဂါရနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးလဲ ရှောင် တယ်လေ….” “ ကောင်းပါတယ်ကွာ…” “ ဟုတ်ပါတယ်….အကို လည်း မေသီကို စိတ်သန့်မှ လုပ်ပါ အကို စိတ်မသန့်ရင် အလကား ပိုက်ဆံကုန် နေမှာ….” ချစ်ထွန်းက ကြေးစားမလေး မေသီကို လေးစားစွာ တစ်ချက်နမ်းလိုက်သည်။ ရေမွှေးနံ့က ရင်ထဲအထိ ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်သွားသည်။
“ မင်းကို မြင်မြင်ချင်း…” “ လိုးချင်သွားတယ်ပေါ့…” “ ဟာကွာ မေသီကလဲ ချစ်တယ်လို့ ပြောမှာပါ…” “ သွားစမ်းပါ အကိုရာ… ချစ်တယ်ဆိုတာလဲ အနက်ဖွင့်ပြီး ကာလကုန်အောင် စောင့်ကြည့်တော့ နောက်ဆုံးတော့ လိုးချင်တယ် ဆိုတာပဲ ထွက်လာတာပါ…” “ မင်းကို အကို အရှုံးပေးလိုက်ပြီ…” “ ဒါပေါ့…ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေ…ဟင်း…” မေသီက ချစ်ထွန်းလီးထိပ်ဖူးအဝကို လက်ညှိုး လေးဖြင့် ပွတ်ကြည့်၍နေသည်။ “ မင်း…ဘယ်ပုံစံကို ကြိုက်သလဲ…” “ အိုး…အကိုက ပိုက်ဆံပေးထားတာပဲ အကိုကြိုက်သလို ပြောလေ ကုန်းပေးရမလား…” “ အေး ကောင်းတယ်….ဖင်ကုန်း….” “ အကို…ဖင်ထဲတော့ မလိုးနဲ့နော်…အကို…” “ အေးပါ ဟာ…” “ ပြောထားရသေးတယ်…အကိုတို့ ယောက်ျားတွေက နှာခေါင်းပေါက်တောင် ထားချင်တာ မဟုတ်ဘူး…” “ စကားပြော လိုက်တာ သာလိကာမလေးရယ်…” မေသီက ခစ်ကနဲ တစ်ချက်ရယ်သွမ်းရင်း…စောစောက ချစ်ထွန်းက ချွတ်ပေးမယ်ပြောခဲ့ သော်လည်း မချွတ်ဖြစ် သေးသည့် သူမ၏ ထဘီကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး ချစ်ထွန်းဖက်သို့ တစ်ချက်လှည့်ပြလိုက်ပြီး ကော့ပြလိုက် သည်။
“ ပစ္စည်းလည်း ကြည့်အုံးနော် အကို…” ချစ်ထွန်းဆီက စကားပြန်မရတော့။ ခါးကို ကော့ထားသဖြင့် အန်ထွက်လာသော စောက် ဖုတ် အသားစိုင်ကြီးက နဲနဲနှောနှောကြီးမဟုတ်…အလယ်ကွဲကြောင်းစပ်ကြားမှ ခပ်ဟဟပြူးထွက်နေသော စောက်စိကြီးက လက် ဆစ်ခန့်ရှည် သည်။ စောက်မွှေးအချို့က ပေါင်ခြံအထိ ခပ်ပါးပါးရှိသည်။ “ မင်း ဟာကြီးကလဲ သေးမှမသေးပဲ မေသီ…” “ ဟင်း… ဟင်း…ဒါမထသေးဘူး….သဘောပေါက်…” အမလေး ထများထရင်တော့ ဒါကြီးအက်ကွဲလာလေမလား မဆိုနိုင်။ ချစ်ထွန်းက မေ သီ့ စောက်ပတ်ကြီးကို ခပ်ရွရွ ကိုင်ကြည့်ကာနေစဉ်… “ ကဲ…ကိုက်စားမှာလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖယ်တော့…” မေသီက ငြိမ့်ညောင်းစွာ ကိုယ်ကို တပတ်လှည့်ပြီး ချစ်ထွန်းရှေ့၌ဖင်ကို ကားပြီး ကုန်းပေးလိုက်သည်။ အောက်ခြေ ရှင်းရှင်းနှင့် စောက်ပတ်ကြီးက ဖင်ကြား မှ အနောက်သို့ အုံလိုက်ကြီး ပြူးထွက်လာသည်။ “ အကိုကလဲ အဟင့်…ဘာလို့ အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေရတာလဲ လုပ်မယ့်ဟာ ကို မလုပ်သေးဘဲနဲ့…” ချွဲတဲတဲ နှာသံလေးနှင့် တီးတိုးပြောလိုက်သော မေသီ၏ စကားကိုကြားမှ ချစ်ထွန်းက မေသီ၏ ဖင်နောက် နားသို့ တိုးကပ်ပြီး ရပ်လိုက်သည်။
ကားဂိုဒေါင်အပြင်ဖက် တိုက်ကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လူသွားလမ်းလေးအတိုင်း လက်နှိပ်မီးသေးသေးလေးဖြင့် အသုံးပြု၍ အရိပ်တစ်ခုက ကားဂိုဒေါင်ဆီသို့ ချဉ်းကပ်၍လာသည်။ တကယ်ဆို ထိုလက်နှိပ်မီးရောင်လေးကို ချစ်ထွန်းရှိရာ ပြတင်းပေါက်မှ မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ချစ်ထွန်း အာရုံက မေသီ စောက်ပတ်ကြီးပေါ်၌သာ ရောက်နေသဖြင့် မီးရောင် ကို သတိမထားမိလိုက် ချေ။ မေသီက သူမ၏ကြီးမားလှသော တင်ပါးကြီးနှစ်လုံးကို ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့ရင်း ဆော့ကစားနေရာ တောင်နေသော ချစ်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးနှင့် မေသီ၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ မထိတထိဖြင့် ယမ်းခါနေသည်။ တစ်ချက် တစ်ချက် မေသီက ချစ်ထွန်း၏ လီးကြီးကို စောက်ပတ်အောက်သို့ လျှိုသွင်းထားပြီး ပေါင်နှစ်လုံးနှင့် ညှပ်ခါ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်နေသဖြင့် လီးကြီးမှာ မချင့်မရဲကြီး ဖြစ်လာပြီး ချစ်ထွန်းကိုယ်တိုင်မှာလည်း ရှုးရှုးရှဲရှဲ အသံတွေ ထွက်လာသည်။
“ ခစ်…ခစ်….ခစ်….မာန်ထလာပြီ…ခစ်ခစ်…” ချစ်ထွန်း၏ လက်နှစ်ဖက်က မေသီ၏ ဖင်ကြီးတွေကိုကိုင်ရင်း လီးနှင့်စောက်ပတ် တဲ့တဲ့ဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေရင်း နှာမှုတ်သံကြီးက ပြင်းထန်၍လာသည်။ မေသီက သဘောကျပြီး တခစ်ခစ်ရယ်ရင်းပြောသည်။ “ နင့် ဖင်က ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းဟာ…” “ အိုး….ဝင်အောင်လုပ်ပေါ့လို့…ခစ်…ခစ်…” မေသီက ဆော့ကစားနည်း တစ်ခုဟူ၍ပင် သတ်မှတ်နေ သလားမသိပါ။ ချစ်ထွန်းကို ပြောင်စပ်စပ်ပြောရင်း လီးတန် ကြီးကို စောက်ဖုတ်ဝသို့ မဝင်အောင် နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြင့်၎င်း၊ ဘယ်ညာ ရမ်းခါ၍၎င်း ရှောင်တိမ်းနေရာ ချစ်ထွန်း ကျွဲမြီးတိုလာ သည်။ ခပ်ဖွဖွကိုင်ထားသော မေသီ၏ ခါးသေးသေးလေးကို သူ့လက်ကြီး ဖြင့် တင်းကြပ်စွာ စုံကိုင်ဆုတ်ယူပြီး ရမ်းခါနေသော ဖင်ကြီးကို ထိန်းချုပ်လျက် ဖင်ကြားထဲမှ နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော စောက် ပတ်အုံကြီးကြားသို့ လီးထိပ်ကြီးကို မရမက ဇွတ်သွင်းလိုက်သည်။
“ ဗြွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…” “ အ…အဟ…ကျွတ်…ကျွတ်…အကိုကလဲ တအားပဲ…” “ နင်က ငြိမ်ငြိမ်မှ မနေတာ…” “ ချစ်လို့ ကျီစား တာပဲ ဟာကို…” “ ငါက မနေနိုင်တော့ဘူး ဟ…” “ အ….ဟင်…အကိုကလဲ ထန်သလားမမေးနဲ့….အ…အား…ကျွတ်… ကျွတ်….ကျွတ်….အဝင်ကြမ်းတယ်ကွာ….. အကို့ လီးထိပ်ဖူးကြီးက တော်တော်မာတာပဲ ရှီး…အ….” မေသီ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီးကို တရွေ့ရွေ့စိုက်ချနေရာ မေသီကို စကားပြန်မပြောနိုင်ချေ။ “ ဗြစ်…ပလစ်…ပြစ်…ဗြစ်…” “ ဟား…အား…ရှည်လျှား လိုက်တာ အကိုရာ အကို့ဟာကြီးက မဆုံးသေးဘူးလား….အိုး…အိုး…ကျွတ်….ကျွတ်…. လည်ပင်းမှာတောင် တစ်ဆို့ဆို့ကြီး ဖြစ်လာပြီကွာ….” “ အဆုံးဝင်လား…မေသီ…” “ အိ…အ…ဝင်တယ်….ဝင်တယ်…အဆုံးပဲ….အိ…အ….” မေသီ၏ ဖင်ကြီးမှာ မ ရမ်းနိုင်တော့၊ မဆော့နိုင်တော့ချေ။ တင်းကြပ်သော လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခု လုံး ပြည့်ကြပ်သွားအောင်ပင် တိုးဝင် နေဆဲ…။
“ အား…အ….နေအုံး….နေအုံး….အမလေး…တအားနာလာပြီ အကို….ခဏလေး….ခဏလေး….” “ ဘယ်လိုလုပ်အုံးမလို့လဲ မေ သီ…” “ တံတွေးနဲနဲစွတ်မှ ခံနိုင်မှာ နေပါအုံး….” မေသီက နီရဲသော နှုတ်ခမ်းစိုစိုလေးကြားမှ တံတွေးအနည်းငယ်ကို စွတ်ယူပြီး လီး ကြီးနှင့် စောက်ပတ်ကြားသို့ စိမ့် ဝင်အောင် လက်ပြန်ကိုင်ပြီးပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ “ ဖြေးဖြေးနော် အကို….တအားနာရင်တော့ မေသီ အော်မှာ သိလား…” “ အေးပါ…ပေါင်နည်းနည်း ထပ်ကားလိုက် ဟုတ်ပြီ….” အမှောင်ထုထဲမှ မီးရောင်ငယ်သည် ကားရုံ၏ နောက်ဖက် အခန်းဘေးတွင် မှိတ်သွားကာ ငြိမ်သက်သွားသည်။ အခန်းထဲမှ မပီဝိုးတဝါး စကားအချို့ကြားလိုက်ရစဉ် အရိပ်က ငြိမ် သက်ခါ အခန်းတွင်းသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ကောင်မ လေး တကိုယ်လုံး အဝတ်မရှိ ကုတင်ဘောင်ကို လက်ထောက်ပြီး ဖင် ကြီးကုန်းထားသောကြောင့် နို့ကြီးနှစ်လုံးက တွဲလွဲ လှုပ် ရမ်းနေသည်။ ကောင်မလေး ဖင်နားတွင် မျက်နှာကြီး ငုံ့လျက် လက်နှစ်ဖက် က ခါးနှစ်ဖက်ကို စုံကိုင်ကာ လီးတန်တစ်ဝက်ခန့် ဝင်နေသော စောက်ပတ်ထွားထွားကြီးကို စိုက်ကြည့်နေသူက ချစ်ထွန်းဖြစ် နေသည်။
သီတာ ပါးစပ်လေးကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် အထိတ်တလန့်လေး ပိတ်လိုက်မိသည်။ “ နာတယ်…နာတယ်…အကို မေသီ မခံ နိုင်ဘူး…အကို့ဟာကြီးကို တဝက်ပဲ လိုးပါ အကိုရယ်….” သီတာ နားတွေ ထူပူကုန်သည်။ သီတာသည် အိမ်ထောင်ရှင်မတစ် ယောက်ဖြစ်သော်လည်း သည်လို တခြားမိန်းမ နှင့် ယောက်ျားတို့ လိုးသောမြင်ကွင်းမျိုး တခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ချေ။ “ အား….အား….နာ ပါတယ်ဆိုမှ အဆုံးထိ သွင်းနေပြန်ပြီ….ကျွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်….” မေသီဟုခေါ်သော မိန်းမငယ်လေးက သူမ၏ ဖင်ကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆက်ခါ ဆက်ခါပွတ်ရင်း ငိုမဲ့မဲ့လေး ပြော နေလင့်ကစား ချစ်ထွန်းက မေသီ၏ ခါးသေးသေးလေးကို ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ဆုတ်လိုက်ပြီး သူ၏ ပြောင်လက်နေသော လီး တန်ကြီးကို မေသီ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ပက်ကျိသွားနှုန်းမျိုးဖြင့် လိုး သွင်း၍နေသည်။ “ အမလေး…အ….အီး….သေပါပြီနော်….ဟင်း….ဟင်း….မေသီ့ကို သနားပါအုံး အကိုရယ်….” အသံလေးက တိုးတိုးလေးပဲဖြစ်သည်။ သို့သော် သီတာ ကောင်းကောင်းကြားနေရသည်။ သီတာ၏ ခြေတွေ လက် တွေ အေးစက်လာသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းလည်း မြန်လာနေသည်မို့ ကိုယ်ပါရောပြီး အလိုလိုမောလာသည်။ နားထင်စပ်မှ ချွေးသီးလေးများ စို့ထွက်လာကာ အာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာပြီး တံတွေးလေး မြိုချလိုက်ရသည်။
“ ဗြွတ်….ဘွတ်….” “ အ…ကွဲပြီ….ကွဲပြီ….ဒုက္ခပါပဲ ရှီး….ကျွတ်….ကျွတ်….” ကောင်မလေး ခါးလေးကုန်းထလာပြီး သူမ၏ စောက်ပတ်ကို ဗိုက်အောက်သို့ သွင်းသည်။ လီးကြီးက အနည်းငယ် ပြန်ထွက်လာသည်။ “ ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ ဟ…ဆုံးပဲ ဆုံးနေ ပြီ….” “ မခံနိုင်ဘူး….မခံနိုင်ဘူး….ဟူး…ဟူး….ဟူး….” သီတာ ချောင်းကြည့်နေသည်။ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာသည်။ ဒူးတွေ ကွေးညွှတ်ချင်လာသည်။ လမွှေး မဲမဲကြီးများက အုံကောင်းလှပြီး ညိုထွားလှစွာသော ချစ်ထွန်း၏ လီးကြီးကိုလည်း တအံ့ တအောလေး စူးစိုက်ကြည့်နေမိ သည်။ “ အင့်….အင့်….အင့်…အ…အ…” “ ပြွတ်…ဗြစ်….ပြစ်…ပြွတ်….” ချစ်ထွန်း မီးကုန်ယမ်းကုန် ဒလစပ်ဆောင့်၍နေရာ ဂွေးစိကြီးနှစ်လုံးက မေသီဆီးခုံအထိ ကော့ကော့ပြီး ဖျောက်ကနဲ ဖျတ်ကနဲ ရိုက်သည်။
ပြွတ်ကနဲ ပြစ်ကနဲ အသံလေးတွေက သုံးလေးချက် ဆောင့်မှ တစ်ခါထွက်လာတတ်သည်။ မေသီ ဆိုသော ကောင်မလေးက ကု တင်ဘောင်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ပြီး မျက်လုံးလေးကို စုံမှိတ်ပြီး နှုတ်ခမ်း လေးကို ကိုက်လျက် ခေါင်းလေးကို မော့ထားရှာသည်။ မေသီ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံ တင်းတင်းလေးစေ့ထားသည့်ကြားမှ လည်ချောင်းသံတအင့်အင့်က ဆောင့်ဆောင့်ထွက် လာသည်။ သီတာတစ်ယောက် ဘာမှ သတိမရဘဲ ဆက်လက်ချောင်း မြောင်းနေမိပေရာ အားရစရာကောင်းလှသော ကျားကျား ယားယားရှိသည့် ချစ်ထွန်း၏လီးကြီးက သီတာ၏ ရင်ထဲ၌ အရိပ် ထင်စွဲကျန်ခဲ့ပေတော့သည်။
သီတာဆိုတာက အခြားမဟုတ်ပေ။ ဒီအိမ်၏ အိမ်ကြီးရှင် ဦးထူးကျော်၏ ဇနီးဖြစ်သ ည်။ သမီးတစ်ယောက်အမေ ဖြစ်ပြီး အသက် က (၃၂)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဦးထူးကျော်နှင့် သီတာတို့မှာ ချစ်ထွန်း၏ အလုပ်ရှင်ဟုလည်း ပြော၍ရသည်။ သူငယ်ချင်းဟူ၍လည်း ပြော၍ရသည်။ ထူးကျော်နှင့် ချစ်ထွန်းက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သည်။ ထူးကျော်အလုပ်မှန်သမျှကို ချစ်ထွန်းက အားလုံး ဝိုင်းဝန်း၍ လုပ်ပေးခဲ့သည်မှာ ထူးကျော် အိမ်ထောင်မကျမှီ ကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ ချစ်ထွန်းက ကားက အစ မောင်း၍ပေးသည်။ အရင်က ထူးကျော်နှင့် ချစ်ထွန်းတို့ တိုက်ကြီးပေါ်တွင် အတူနေခဲ့ကြသည်။ နောက် ထူးကျော် အိမ်ထောင်ကျ သွားတော့ ချစ်ထွန်းက ကားရုံထဲတွင် ဆင်း၍နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော (၄)လခန့်ကတော့ ထူးကျော်တစ်ယောက် ကားအက် စီးဒင့်ဖြစ်ကာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရရှာသည်။
သီတာက သူမရှေ့မှ မြင်ကွင်းကို စူးစူးရဲရဲကြည့်နေလေသည်။ ချစ်ထွန်းက အဆက်မပြတ် ဆောင့်၍ -ိုးနေသော အခါ မေသီက သူမ၏ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ စည်းချက်ဝါးချက်ကျကျလေး ပြန်၍ဆောင့်ပေးနေသည်။ “ အား….ရှီး….ကောင်းလိုက်တာ ကိုကို ရယ်….” မေသီက မျက်တောင်လေး မှေးပြီး အစ်တစ်တစ်အသံလေးနှင့် ပြောလိုက်သံကို ကြားရသောအခါ သီတာ၏ စိတ်ထဲမှ မေသီကို နေရင်းထိုင်ရင်း အတော် စောက်မြင်ကပ်သွားမိသည်။ “ အခုနကတော့ သေတော့မယ့်အတိုင်း…” ဟု စိတ်ထဲမှ မကျေမ နပ်ရေရွတ်နေမိသည်။ “ ထွက်…ထွက်ကုန်ပြီ ကိုကို….အ….အ…” “ အင့်….အင့်….အင့်….ကဲကွာ…ကဲကွာ….”
ချစ်ထွန်းကလည်း လက်မောင်းကြောကြီးတွေ ထောင်ထလာအောင် မေသီ၏ ခါးလေးကို တအားဆုတ်ကိုင်ဆွဲယူပြီး လီးတန်ကြီး ကို အဆုံးဖိ၍ ဆောင့်ချလိုက်ပြီး ချစ်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးကလည်း မေသီ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ အတင်းဖိကပ်၍ ချစ်ထွန်း၏ ကိုယ် ကြီးသည် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်သွားရလေသည်။သီတာ ချာကနဲ လှည့်၍ ထွက်ခဲ့သည်။ သူမ၏ ရင်ထဲတွင်တော့ ချစ်ထွန်းသည် သံချောင်းကြီးအလားရှိသည့် ထွားကြိုင်းအက်ကွဲ၍နေသော လီးတန်ကြီးတစ်ချောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ယောက်ျားပီသသူတစ် ဦးဖြစ်ပါလေလားဟု တုန်တုန်ယင်ယင်လေးပင် တွေးမိလိုက်လေတော့သည်။
(၂) ထူးကျော် ဆုံးပြီးကတည်းက သီတာတစ်ယောက် နေ့စဉ်လို မျက်ရည်နှင့် မျက်ခွက်ဖြစ်နေရှာသည်။ မိခင်ဖြစ်သူ နေ့စဉ် ငို နေသည်မို့လည်း ရှယ်လီ လေးခမျာ အချော့ခံရမည့်အစား သူမ ကပင် မိခင်ဖြစ်သူ သီတာကို ပြန်၍ ချော့မော့ရမလို ဖြစ်နေသည်။ အဆိုးဆုံးကား သီတာ အရက်သောက်တတ်လာ၏။ “ သီတာ…အရက်သောက်တတ်လာတာတော့ မကောင်းဘူး…” “ အော်… အော်….ကိုချစ်ထွန်းက ကျမကို သတိပေးဖော်ရသေးသားပဲ….အဟတ်ဟတ်….” ဒီနေ့လည်း သီတာ တစ်ယောက် ထုံးစံအတိုင်း မူး နေပြန်သည်။ “ ကျနော်က စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါ သီတာ…” “ စေတနာ….ဟလား…သီတာ့ကို ရှင်ဘယ်လောက်အထိ နားလည်ထားသလဲ ကိုချစ်ထွန်း…” မှေးစင်းထားသော မျက်တောင်ကော့ကြီးများဖြင့် သီတာက ချစ်ထွန်းကို ခပ်ငေါ့ငေါ့မေးလိုက် သည်။
“ ကျနော်က သီတာတို့လို ပညာတတ် တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး သီတာ…ရှင်းရှင်းပြောရရင် သီတာ့ကို သနားမိလို့ ပါ…သေသူက ပြန်ရှင်ရိုးမှ မရှိတာဘဲ….သီတာ…” “ အဲဒါကြောင့် ကျမ ဒုက္ခလှလှတွေ့တာပေါ့…ဟင်း…ဟင်း…သူ့ကြောင့် ကျမ ဘယ်လိုဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုရော ရှင်သဘောပေါက်သလား ကိုချစ်ထွန်း…ဟင်…ပြောစမ်းပါ….” “ အာ….ပေါက်တာ ပေါ့….သီတာ….ပေါက်ပါတယ်…လင်ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရတဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက် ဟာ လုံခြုံမှု အားကိုးမှုတွေ ကွယ်ပျောက်ကုန်တာပေါ့….ဒါပဲလေ…” “ ဟား….ကိုချစ်ထွန်း ရှင်ဟာ ကျမထင်တာထက် ပိုညံ့တယ်….အတော်လေးညံ့ တယ်….သိလား….” “ ဗျာ….” “ မဗျာနဲ့လေ….သိက္ခာတွေ သမာဓိတွေနဲ့ အရှက်အကြောက်တွေကြားမှာ ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကာမဆန္ဒကို ဘယ် လိုအစားထိုးရမှာလဲ….” “ သီတာ…” ပုံမှန်လည်ပတ်၍နေသော ကမ္ဘာကြီးသည် ရုတ်ချည်း ရပ်တန့်၍သွား သည်။ ချစ်ထွန်း အလန့်တကြား အော်လိုက် သည်။ သီတာကိုလည်း အံ့သြ နှမြောတသစွာသော မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်သည်။
“ ဟင်း….ဟင်း….ကိုချစ်ထွန်း သီတာကို အထင်သေးသွားပြီ မဟုတ်လား….ဟင်း….ဟင်း….ဒါပါဘဲ လောကကြီးက သဘာဝရဲ့ အမှန်တရားတချို့ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောဆိုဖို့ ခွင့်မပေးပါဘူးလေ…..မဟုတ်ဖူးလား….ဒီတော့ ကျမ ညစ်တယ်… ဖောက်ပြန်တယ်….တဏှာကြီးတဲ့ မိန်းမစာရင်းထဲလည်း ကျမ မပါချင်ဘူး တဏှာကြီးသူ မဖြစ်ချင်ဘူး….ဒီတော့ သောက်တယ် မူး တယ် မူးတော့ မေ့မယ် ဒါကြောင့် သောက်တယ်….” သီတာ ချစ်ထွန်းကို မထေမျက်မြင် တဲ့တဲ့ပြုံးပြပြီး အရက်ခွက်ကို မော့၍ သောက်ချလိုက်သည်။ တက်တက်စင်သွား သော အရက်ဖန်ခွက်ထဲသို့ အရက်ထပ်ဖြည့်ရန်အတွက် ပုလင်းကို လက်လှမ်းလိုက် ပြန်သည်။ “ တော်ပြီ….သီတာ….သီတာ လွန်နေပြီ…” ချစ်ထွန်းက ဖြူလွှသွယ်လျှသော သီတာ၏ လက်လေးကို ဆတ်ကနဲ အပေါ်မှ အုပ်ကိုင်ပြီး ဟန့်တားသည်။ သီတာက သူ့လက်ကို ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ထားသော ချစ်ထွန်း၏ မျက်နှာကို ဆတ်ကနဲ မော့ကြည့်သည်။
“ ရှင်….ကျမ အသားကို မထိနဲ့ ကိုချစ်ထွန်း….” “ သီတာ….ထပ်မသောက်နဲ့လေ….” “ ဒါ ကျမ အခွင့်အရေးပါ….ရှင့် အပူမပါဘူး ” “ သီတာ့ အတွက် ကျနော် တားနေရတာပါ….” “ ဟင်း….ဟင်း….ဟင်း….ကိုချစ်ထွန်း ရှင်ဟာ အတော်မတရားတဲ့သူ ဘဲ….ဟင်း….ကျမ အရက်သောက်တာကို တားတယ်နော်….ဟိုကားရုံက အခန်းထဲမှာ ရှင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ည လုံးခေါ်ပြီး လုပ်နေတာကျတော့ အဲ့ဒါ လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်လား ကိုချစ်ထွန်း….” ချစ်ထွန်းက ဆုတ်ကိုင်ထားသော သီတာလက်လေးကို ကယောင်ကတမ်းလွှတ်လိုက်မိရင်း ကုန်းထားသော ခါးကို ဆန့်၍ ရပ်လိုက်သည်။ “ ပြောလေ….ကိုချစ်ထွန်း ” “ ကျနော်က ယောက်ျားလေးပါ သီတာ…” “ အော်….အော်….ယောက်ျလားတော့ ဖာချလို့ရတယ် မိန်းမက ယောက်ျားကို ခံချင် တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြ သလဲဟင်….” “ တော်တော့ သီတာ….သီတာ သိပ်မူးနေပြီ….” ချစ်ထွန်း၏ စိတ်ထဲ၌ မကြာမီ တစုံ တရာ အမှားအယွင်းကြီး မှားယွင်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်သွားသည်။ သီတာ သောက်မည့် အရက်ခွက်ကို ချစ်ထွန်းက အမှတ်မဲ့လိုဖြင့် တိုက်ချလိုက်သည်။
“ ယောက်ျားတွေ မူးသလို မိန်းမတွေရော မူးလို့ မရဘူးလား ကိုချစ်ထွန်း….ရမ်းလို့မရဘူးလားဟင်….ကိုယ်လုပ်ချင် တာကို စွပ်ပြီး လုပ်ပစ်ဖို့ လောကကြီးက ဘာလို့ခွင့်မပြုတာလဲဟင်….” ဒေါသနှင့် ဒယိမ်းဒယိုင်ထရပ်ရင်း အော်ပြောလိုက်သော သီတာတစ် ယောက် ဆိုဖာပေါ်သို့ ဝရုန်းသုန်းကား ပြန်ပြီးလဲ ကျသွားရာ သူမ၏ ခပ်ရော့ရော့ထဘီလေးက ဖျတ်ကနဲ ကျွတ်ပြီး ပေါင်လည်ထိ လျှောဆင်းသွား၏။ ဆီးခုံမှ မွှေးညှင်းနုနုနှင့် အိဝင်းမှည့်တင်းနေသော တင်ပါးကြီးအစုံက မိမွေးတိုင် ဖမွေးတိုင်းဖြစ်ကာ ချစ်ထွန်း၏ မျက်လုံးများကို ပြူးကျယ်သွားစေ သည်။ “ ကိုချစ်ထွန်း….” “ ဗျာ….သီတာ….” “ ရှင် သီတာကို မသနားဘူးလား ဟင်….” “ သ..သနားပါတယ်….သီတာ…” “ ကျမကို နားရောလည်ပြီလား ဟင်….” ငိုသံအက်အက်လေးနှင့် ပြောရင်း သီတာ၏ လက်လေးတစ်ဖက်က သူမ၏ စောက်မွှေးလေးများကို ရွရွှလေးပွတ်၏။ ဆိုဖာကို ကျောမှီထားရင်း အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့် လည်း ဝင်းစက်စက် နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။
“ ပြောလေ…ကိုချစ်ထွန်း….” “ နား….နားလည်ပါတယ်….သီတာရယ်…” ချစ်ထွန်း၏ ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ အိအိစို စို ခန္ဓာကိုယ်မယ်လေး၏ ရာဂခိုးဝေသော မျက်လုံးအစုံကိုပင် သူရင်မဆိုင်ရဲပေ။ မဖြစ်စဖူး ရင်ခုံသံကြီးက ကျယ်လောင်စွာ ထွက် ပေါ်လာပြီး အလိုလိုနေရင်း ရင်မောလာသည်။ ကျောက် ရုပ်ကြီးတစ်ရုပ်နှယ် ခြေစုံရပ်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ဆန့်ကြီးချရပ်နေ သော ချစ်ထွန်း၏ ပုဆိုးကြားမှ တစုံတရာသည် ထောင်၍ထကာ ရှေ့သို့ငေါထွက်လာသည်။ သီတာက ဒါကို မြင်သည်။ ပြုံးရိပ် လေးသန်းနေသည်။ ဗိုက်အောက်မှ ကွေးဆင်း ငုံ့ဝင်နေသော စောက်ပတ်လေးကို အထက်သို့ကော့တင်ပစ်လိုက်ပြန်သည်။ အသား ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသော သီတာ၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ ဖောင်းအိစွင့်ကားနေပြီး စောက်ပတ်တစ်ခြမ်းကို လက်ကလေးနှင့် မသိမသာဆွဲ ဖြဲထားသဖြင့် ရဲနေသော အတွင်းသားနီနီလေးကို ကြည့်ရင်း ချစ်ထွန်း တံတွေးကို ဂလုကနဲ မြိုချလိုက်မိလေသည်။
ထိုင်းကနဲ ထောင်းကနဲ အချုပ်အထိန်းမရှိ ထောင်လာသော လီးတန်ကြီးက ပုဆိုးကြားမှ အရုပ်ဆိုးစွာ ထိုးထွက်လာ ပါလေသည်။ ချစ်ထွန်း၏ ခြေအစုံက မူလီစုပ်ထားသလို မရွေ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာ သံလိုက်အား အဆွဲခံရသော သံထည် ကြီးတစ်ခုလိုရှေ့သို့ ငိုက်ငိုက်သွားလိုက် ပြန်ပြီး တင်းမတ်လာလိုက်ဖြစ်နေသည်။ “ ရှင်….ကျမကို နားလည်တယ်ဆို….” အစ်တစ်တစ် တိုးအက်အက် အသံလေးက ရှတတလေး တိုးညှင်းငြိမ်သက်စွာ ပေါ်လာသည်။ ချစ်ထွန်းစိုက်ကြည့်နေ သည့် စောက်ပတ်ဖွေးဖွေးကြီး၏ အကွဲကြောင်းရဲရဲလေးထဲမှ စောက်စေ့နီနီလေး။ “ လာလေ….ကိုချစ်ထွန်း…” သံလိုက်ဆွဲငင်အားထက် ပြင်းသော ဣတ္ထိယ ဆွဲငင်အားကြောင့် ချစ်ထွန်းသည် သီတာရှိရာသို့ ဒရွတ်တိုက်ကြီး ရွေ့လျားရောက်ရှိသွားသည်။ သီတာက ချစ်ထွန်း၏ ပုဆိုးကို ဆွဲ၍ချွတ်ချလိုက်သည်။ ဒိုင်းကနဲ ပုဆိုးကြားမှ ကန်ထွက်လာ သော ကြီးမားတင်းပြောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို သီတာက ဖောင်း ကစ်ဖြူဖွေး၍ သွယ်လျှနေသော သူမ၏ လက်ချောင်း လေးများဖြင့် အထက်အောက်ဆင့်ကာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖွဖွလေး ဆုတ်ကိုင် လိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို ဖြဲချလိုက်သည်။ လီးတန်ကြီး၏ ထိပ်ဖူးကြီးက ညိုမဲနေပြီး အတွင်းပိုင်း ဒစ်အောက်ခြေ၌ အနည်းငယ်နီ ရောင်သန်းနေသည်။ ဆုတ်ကိုင်ထား သော သီတာ၏ လက်လေးနှစ်ဖက် အတွင်း၌ လီးကြီးမှာ လျှံထွက်နေသည်။ တစ်ပတ်ဆုတ်၍ မနိုင်အောင် လုံးပတ်ကြီးက ထွားကြိုင်းလှသည်။
“ ရှင်ဟာ ယောက်ျားပီသလွန်းသူ တစ်ယောက်ပဲ ရှင်…” သီတာက အသိတရားမဲ့သော ကာမနွံအတွင်းသို့ တရစ်ရစ်တိုးဆင်း နစ်မြုပ်စပြုလာသည်။ ရွှမ်းစိုနီရဲသော နှုတ်ခမ်း လေးအစုံဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ငုံလိုက်ကာ အတွင်း၌ လျှာဖျားလေးဖြင့် မထိတထိ လေး ကလိ၏။ “ အ…..ကျွတ်….အင်း….အင်း….အင်း….သီတာရယ်….” ချစ်ထွန်း၏ လက်နှစ်ဖက်က သီတာ၏ နောက်ကျောမှ ဆိုဖာကျောမှီကို ဆတ်ကနဲ လှမ်း၍ ထောက်လိုက်သည်။ ဆီးခုံကြီးပေါ်၌ ထောင်ထနေသော လမွှေးကြီးများမှာ ရှဲကနဲ ထောင်ထ သွားပြီး ထောင်ထ အုံကြွကုန်သည်။ ပေါင်ခြံတဝိုက် သာမက ဖင်ကြီးများပါ ကြက်သီးလေးများ အစီအရီပေါ်ထွက်လာကြသည်။ သီတာက ပါးစပ်အတွင်းမှ ဒစ်ကြီးကို အသာပြန် ဆုတ်ပြီး ဒစ်ချိုင့်ထဲသို့ လျှာဖျားလေးဖြင့် ခပ်ဖိဖိလေး ထိုးဖိကာ ရစ်ဝိုက်ကစား လိုက်သောအခါ…. “ အား….အား…..သီတာ….သီတာ….ရယ်….အဟင်း….ဟင်း…..” ချစ်ထွန်း၏ ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်က ဘေးသို့ ကားသွားပြီး သီတာ၏ ပါးစပ်လေးထဲသို့ လီးကို ဖိသွင်းလိုက်မိ၏။ လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားမှုကြောင့် လီးကြီး က သီတာ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ (၂)လက်မခန့်သာ ဝင်သွား၏။ သီတာက လီး ထိပ်ဖူးကြီးကို မိမိရရစုပ်ထားပြီး သူ၏ လျှာလေးကို မာကျ စ်လျှက် ဒစ်ကြီးကို ဝိုက်၍၎င်း ထိပ်ဖူးကြီးကို လျှာဖျားဖြင့် ထိုးလိုက် လျှာပြားဖြင့် ယက်လိုက် လုပ်ပေးသည်။
“ ဟား….အား….အို့အိုး….ကျွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်…..” ချစ်ထွန်း၏ မျက်နှာကြီးက မျက်နှာကျက်ဆီသို့ မော့လိုက် သီတာလုပ်နေ ပုံကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ဖြင့် ဂဏာမငြိမ်အောင် ဖြစ်နေပြီး နှုတ်ခမ်းကိုလည်း လျှာဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ယက်နေမိသည်။ လီးတန်ကြီးကမူလ ထက် (၂)ဆခန့် ထွားလာပြီး အံ့ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင်ပင် မာကြောလာ၏။ အကြောများ အပြိုင်းပြိုင်းထလာသည်။ ခပ်မော့ မော့ကြီး ထောင်နေသော လီးဒစ်ကြီးက မီးချောင်းရောင်ဖြင့် တဖြတ်ဖြတ်တောက်ပကာ တံတွေးလေးများဖြင့် စိုစွတ်ပြောင်တင်း လာသည်။ “ ရှင်….ဒီမှာထိုင်ပါလား ကိုချစ်ထွန်း…” သီတာက ချစ်ထွန်းကို လေးယောက်ထိုင် ဆိုဖာကြီးပေါ်၌ ထိုင်ခိုင်းသည်။ ချစ် ထွန်းကလည်း သံပတ်ပေးထားသော အရုပ်တစ်ရုပ်ပမာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ချစ်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးက ကိုးဆယ်ဒီဂရီ မတ်တောင် ပြီး ခေါင်းမော့လျှက်ရှိသည်။ သီတာက သူမထဘီကို ခြေထောက်မှ ချွတ်ယူပြီး ဆိုဖာလက်တန်းပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်သည်။ ထဘီ မရှိသော သီတာ၏ အောက်ပိုင်းကြီးက ယောက်ျားနှင့် လေးလ လောက်ဝေးသွားသည့်အချိန်မှာပင် အားသစ်အင်သစ်တွေနှင့် ဖွံ့ဖြိုး စွင့်ကားလျှက် ပိုမိုတင်းမောက်လျှက်ရှိလေသည်။ သီတာ၏ ခြေတစ်ဖက်က ချစ်ထွန်း၏ ခါးမှ ဖြတ်လျှက် ကျော်ခွလိုက်စဉ် ကြမ်း ရှရှ ခြေဖဝါး လေးနှင့် လီးထိပ်ကြီးကို တိုက်မိသွားသေးသည်။
“ အို….ကန်တော့….” သီတာက ရုတ်တရက် တောင်းပန်ရင်း ချစ်ထွန်း၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို သူမ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ ချစ်ထွန်း၏ လီးတဲ့တဲ့ပေါ်သို့ စောက်ပတ်အဝကိုတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချသည်။ “ ဗြစ်….ပြွတ်….ဗြစ်….ဘလွတ်….” “ အား….အား….နာတယ်….သိလား….” ချစ်ထွန်းက သီတာ၏ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဇတ်ကနဲ ဆုတ်ကိုင်ရင်း ခပ်တိုးတိုး အော်လိုက်သည်။ သီတာက ကြားဟန်မတူ တင်းရင်းပြည့်အင့်စွာ လိုးသွင်းနေသော အရသာကို အံလေးကြိတ်ကာ ခံစားရင်း မျက်နှာကို အပေါ်မော့ပြီး ဂွေးစိနှင့် ဖင်ကြီးထိသည်အထိ ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ “ ဗြစ်….ဗြစ်….ဒုတ်….” “ အေ့….အင်း…..အင်း….” သီတာ၏ ဖင်ကြီး ချက်ချင်းပြန်ကြွတက်သွားသည်။ ရှည်လျှားသော လီးကြီးက စောက်ခေါင်းနုနုလေးကို မာကြောစွာ ထိုးဆောင့်မိသွားပုံရလေသည်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးက ချစ်ထွန်း၏ မျက်နှာရှေ့ဝယ် အိပဲ့ အိပဲ့နှင့် ရှိနေသည်မို့ ချစ်ထွန်းက သီတာ၏ မက်မောဖွယ်ကောင်းလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး အားရပါးရကြီးစို့နေမိသည်။ သီတာ၏ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းမှ သွေးသားများ စုပြုံပေါက်ကွဲသွားသည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရေများက ဒလဟော ပြိုဆင်းလာကြသည်။ ချစ်ထွန်း၏ မာတင်း မာကြောနေသော အကြောတွေထနေသည့် လီးတန်ကြီးကို တစတစ စိုစွတ်ပြောင်ဝင်းသွားစေသည်။ သီတာက ဇွတ်ကနဲ ဇွတ်ကနဲ ထိုင်ချလိုက်တိုင်း လီးကြီးထိပ်ဖျားက အစွမ်းကုန် ပြဲကားထားသော သီတာ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တိုး၍ တိုး၍ သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ဖိပွတ်ကာ ဝင်၍သွားသည်။
သီတာ၏ ဖင်သားကြီးများက အောက်မှ ဆိုဖာပေါ်တွင် ထိုင်နေသော ချစ်ထွန်း၏ ပေါင်ပေါ်သို့ ထိုင်ချမိလျှက်ပင် ချစ်ထွန်း၏ သန်မာသော လက်နှစ်ဖက်က သူမ၏ ဂျိုင်းအောက်မှ လျှို၍ သီတာ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ကြုံး၍ ဖက်လိုက်ကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက် တော့ရာ သီတာ၏ ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကလည်း ချစ်ထွန်း၏ ခါးကြီးကို ချိတ်ကိုင်ညှပ်လိုက်ကာ သီတာ ခမျာ သန်မာထွားကြို င်းသော ချစ်ထွန်း၏ လီးကြီးပေါ်၌ ဒန်းစီးနေရသလို ခပ်ကော့ကော့လေးပါသွားလေသည်။ “ ဘယ်လို လိုးမလဲဟင်….ကို ” “ စားပွဲပေါ်ကို တင်လိုးပေးမယ်လေ….” “ အင်….မကြိုက်ပါဘူး….” သီတာက ချစ်ထွန်း၏ လည်ပင်းကို ဟီးလေးခိုကာ မျက်စောင်း လေးထိုးကာ နှုတ်ခမ်းလေးကို စူတူတူလေး လုပ်၍ ပြောသည်။ “ အို…ကဲပါ….ပထမ တစ်ချီတော့ ကို ကြိုက်သလိုလုပ်….နောက် တစ်ချီကျမှ သီတာပြောသလိုလုပ်….ဒါပဲ….” ချစ်ထွန်းက သူမကို ဒီအတိုင်းပင်ထား၍ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ခါးကို သိုင်းဖက် ကာ လီးကြီးကို တစ်ချက် ညောင့် လိုက်သည်။ “ ပြွတ်…” “ အင့်….” “ ကဲပါ….အခုနက အကိုပြောသလိုပဲ စားပွဲပေါ်တင်ပြီး လုပ် ကြည့် လိုးကြည့်အုံးလေ….” သီတာ၏ အပြောနွဲ့နွဲ့ တိုးတိုးလေးနှင့် သီတာ၏ အပြုံးနုနုချွဲချွဲလေးတွေသည် ချစ်ထွန်းကို တင်းတင်း ကြီး ရစ်ပတ်နေလေ၏….
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဘာနဲ့အစားထိုးမှာလဲ